ဒီနေ့ မှ စပြီး မိတ်ဆွေများ စာမျက်နှာအသစ်သို့ကြွရောက်ကြပါရန် နှိုးဆော် လိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ မှ စပြီး မိတ်ဆွေများ စာမျက်နှာအသစ်သို့ကြွရောက်ကြပါရန် နှိုးဆော် လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ မရှိတော့ပါ ...ရန်ကုန်မှ ဘဘဦးဝင်းတင် နားမှတတ်ကျွမ်းသူအား ဒီဘလော့အား ပေးအပ်ပါမည်.. ။ယခင်အားပေး လာရောက်လည်ပတ်သူခဲ့များအား အထူးကျေးဇူးတင် လေးစားပါတယ်။ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။မိမိတတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားပြီးသတင်းများကို တင်ပေးသွားပါမယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:51 AM No comments:
ဒေါင်းအိုကြီး သို့မဟုတ် ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်
by Ag Myint Tham on Monday, July 30, 2012 at 4:29am ·
ဟံသာဝတီသတင်းစာ၊ အန်အယ်ဒီ ဦးဝင်းတင်
တေးမဆိုနိုင်တော့တဲ့ ငှက်အို ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်
ငှက်ပျိုတွေကြား အမြင့်ပျံဖို့တော့ ခက်တယ်
ခြေနှစ်ချောင်းက ဘယ်လို အလိုက်သင့်ထား
လေးသံ အန္တရယ် ကြိုတင်ကာကွယ်
အမျိုးငှက်အပေါင်းကို တွဲ ကူ ခေါ်
အစားအစာရလျှင် မျှလို့ ကျွေး
မိုးမလာခင် လုံးလပြု့ အင်အား စု
ငှက်သင်တန်းတွေ ဆက်ကာ သင်
ငှက်တွေထဲမှာ ဆရာတဆူ ဖြစ်ရမှာ-
ဒီတခါ ငှက်သဘင် အစည်းအဝေးမှာ-
နားချင်ပေမယ့် နားလို ဘယ်လိုမှ မဖြစ်သေး
ငှက်ဆိုတာ ပျံသန်းနေရင်း ဘ၀ဆက်နေမယ်
ဒေါင်းငှက် အသက်ကြီးလာလေ မတရားမှုကို သူ မုန်းပေ။ ။
၃၀၊ ၇။ ၂၀၁၂
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:42 AM No comments:
သူရဲကောင်း ဒိုင်ယာရီထဲက လူထု ဦးစိန်ဝင်း
Written by ခင်ဆွေဦး
Friday, 27 July 2012 14:14
၁။နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း ရာသီ အလှည့်အပြောင်း နှစ်၊ လ၊ နာရီပေါင်းတွေ ဖြတ်သန်း ကျော်လွှားခဲ့ချိန်၊ ကျွန်မ ဆရာ ဦးစိန်ဝင်းနှင့် အသိ အကျွမ်းမက ခင်မင် ရင်းနှီးခဲ့တာ ကျွန်မ အသက် ၃၀ သာသာ ၃၂၊ ၃၃ အရွယ်၊ ဆရာက အသက်အစိတ် ၀န်းကျင်။ ဆရာ ကျွန်မထက် ၈ နှစ်နီးပါး ငယ်ပါတယ်။
လူထု သတင်းစာ မပိတ်ခင် ကာလတွေ ကျွန်မ မန္တလေး ဦးလေးလှ၊ ဒေါ်ဒေါ်မာတို့ လူထုတိုက် ခဏခဏ ရောက်တဲ့ အချိန်တွေပေါ့။ ပြောရရင် မန္တလေးမှာ ရီမြင့် ရုပ်ရှင်ပိုင် နယ်လီ (ရီရီ)ဆီ အထုပ်ချပြီး ဒေါ်ဒေါ်မာတို့ဆီ သွားတည်းခို ခဲ့တယ်။ ကျွန်မဘ၀ လူထုဦးလှ၊ ဦးလေးလှ ကျွန်မရဲ့ဒုတိယ ဖခင်၊ ဒေါ်ဒေါ်မာက ဒုတိယ မိခင်။ ကျွန်မမေမေနဲ့ ဒေါ်ဒေါ်မာတို့ကလည်း အသက်ရွယ်တူတွေ။ လူထုတိုက်သွားတိုင်း၊ အရပ်မြင့်မြင့် ကိုယ်ဟန်သွယ်သွယ် အသားဖြူဖြူ အရေပါးပါး၊ နဖူးကျယ်၊ နားရွက်ကားနှင့် မျက်လုံးအရောင် တောက်တောက်၊ အမြဲတမ်းလို ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။
၁၉၆၄-၆၅၊ ၆၆ ခု၊ ၆၇ ခုနှစ်ထိ၊ မန္တလေးသို့ ခဏခဏရောက်ပါတယ်။ ဒီအချိန်တွေ ကျွန်မ ဒို့တိုင်းဌာနီ လုံးချင်းဝတ္ထုရေးအပြီး တစ်နှစ်တစ်အုပ်နှုန်း၊ ဘ၀နှင့် မုန်တိုင်း၊ ဥမ္မာ၊ ကံ့ကော်ဦး မိုးနှင့် ရေ ၀တ္ထုရေးခဲ့တဲ့အချိန်တွေပေါ့။ ဦးလေးလှ ကြေးနန်းရိုက်ခေါ်တိုင်း ကျွန်မ နှင့်မေမေ လေယာဉ်ပျံနှင့်အချိန် ချုံ့လာခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ။ ၁၉၆၇ ခုနှစ် လူထု သတင်း စာတိုက် ပိတ်သိမ်းခံရပြီး-
“လူထုကိုစိန်ဝင်းနဲ့ အယ်ဒီတာ ၅ ယောက် အဖမ်း ခံရတယ်”
“ထောင်ဒဏ် ၁၃ နှစ်၊ ကိုကိုးကျွန်း ပို့လိုက်တယ်”
ကျွန်မ မေမေနားထဲ စိမ်းနေပါတယ်။
“ဗမာပြည်တောင် ဘက်က “ကျွန်း” တစ်ကျွန်း လေ” လူငယ် တစ်ဦးက ရှင်းပြတယ်။
အဲဒီတုန်းက ကိုကိုးကျွန်း ဆိုတာ အဆန်းဖြစ်နေတာ။ ကျွန်မတို့ အံ့သြခြင်းမက အံ့သြနေမိပါတယ်။ လူထုတိုက်မှ လူငယ် တစ်ဦးက ဖြေတယ်။
“နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တွေပဲထားတဲ့ ကျွန်းပေါ့”
ကျွန်မတို့ သားအမိ စိတ်မချမ်းမသာနှင့် ရန်ကုန်ကို ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ် ဆရာပြန်လွတ်လာတော့ ထောင်သက် ၉ နှစ်။ နောက် တစ်ကြိမ် ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ်။ လွတ်လာတော့ ဆရာဦးစိန် ၀င်း ရန်ကုန်မှာ နေပါတယ်။ လူထုတိုက်ခွဲ၊ ၃၉ လမ်း ဒီက တည်းကနေခဲ့တာထင်ပါရဲ့။ ကျွန်မ ဆရာ့ဆီသွားတွေ့တော့၊ နုနု ဆရာ့ဇနီးက ဆီးကြိုပါ တယ်။ မျက်ရည်တွေ ရစ်ဝိုင်း တဲ့မျက်လုံးအိမ်နှင့်။ ကျွန်မ နုနုကို ပခုံးလှမ်းဖက် နှစ်သိမ့် တော့ နုနုက ကျွန်မ ပခုံးပေါ် မျက်နှာအပ် ငိုရှာတယ်။
“မမဦးရေ ညာဘက် ကိုယ်တစ်ခြမ်း သေသွားပြီ”
“နုနုရေ ဆေးကုရင် ပြန် ကောင်းလာမှာပါ။ ဆရာ ငယ်သေးတာပဲ”
“ကိုစိန်ဝင်းက ဇွဲ ကောင်းတယ်။ ဒီလိုပဲ နုနု ဖြေရမှာပဲ”
ကျွန်မနောက်တော့ ကြားရသမျှ ဆရာဘယ် လက်နဲ့ စာရေးကျင့်နေသတဲ့ လေ။ အို ၀မ်းသာအားတက် စရာပါလား။
ဆရာစာတွေ ဆက်ရေးဆဲ သူ့အိမ်မှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်တန်းဖွင့်သေးတယ်။ ကျွန်မ ဆရာ့အိမ် ရောက်တော့ အိမ်မှာ စာရေးစားပွဲခုံ၊ ကုလားထိုင်တွေနဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသား အပြည့်ပဲ။ သူစာသင်တာ ခဏရပ်ပြီး ကျွန်မကို လာနှုတ်ဆက် စကားပြောလေ့ ရှိပါတယ်။
“ဆရာ စာဆက်သင် ပါ။ ကျွန်မ ခဏလာတာပါ”
“မပြန်ပါနဲ့ ထိုင်ပါဦး။ စကားပြောစရာတွေ ပြောရ တာပေါ့”
ကျွန်မ အားနာပြီး ခဏ ခဏ မသွားတော့ဘဲ နေ နေရာ နုနုက တောင်ကြီး အထက် တန်းကျောင်းအုပ် ဆရာမ အဖြစ် အလုပ်လုပ်ဆဲ၊ ကျွန်မကို ဧည့် သည်တွေ ဖိတ်ခေါ်ကျွေးရင်း လှမ်းခေါ်ပါတယ်။ သည်တုန်း က ဧည့်သည်တွေကတော့ ဆရာဒဂုန်တာရာ၊ ဆရာဗန်း မော်တင်အောင်၊ ဆရာမြသန်း တင့် နောက်ပြီး စာပေအား သစ်ထုတ်တဲ့ လူငယ်တွေ၊ (ကို)အောင်ကျော်ဇော၊ ကျော် ဇောဦး(ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇောသား တွေ)၊ ဘူမိဗေဒကျောင်းသား (ကို)တင်မောင်ဝင်း။ ဒီစာပေ အားသစ်က လူငယ်တွေကို ဆရာ Guide (ဂိုက်) လိုင်းပေး ပါတယ်။ လူငယ်တွေ အပေါ် မေတ္တာစေတနာပွားများရုံမ ကအကြံဉဏ်ပေးလေ့ရှိပါ တယ်။
အဲဒီတုန်းက ကျွန်မလုံးချင်းဝတ္ထု စာပေအားသစ်က ထုတ်ခဲ့တာ (၁) အရုဏ်ဦးမှာ ပန်းသစ်ပွင့်တယ်၊ (၂)နေကြာ မျက်နှာနေမျက်နှာ၊ (၃)အောင် ရဲ့အောင်၊ (၄) နန္ဒမည်သာ တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက် လက်နဲ့ရေးတဲ့ ဆရာဦးစိန်ဝင်း (လူထု)စာတွေကတော့ အများ ကြီးပဲ။ ၀င်းဇော်နာမည်နဲ့ ရေး တာတွေကော၊ အလံမလှဲစ တမ်း၊ တောင်ဗီယက်နမ် ငရဲခန်းများ၊ အဖြူအ၀ါ(ဘာ သာပြန်)၊ ဆာယိုနာရာ ဆရာ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းလည်း မရအရသင်သေးတာ။ စာ ရေးဆရာမဂျူးရယ်၊ ကျွန်မ သမီးပုလဲရယ် ဆရာ့သင်တန်း တက်သေးတာ။ ဆရာက အချိန်နည်းနည်းသင်ရုံရှိသေး။
ဘီစီမှာ Advance English (အင်္ဂလိပ်စာအဆင့် မြင့်သင်တန်း) တက်ဖို့ ဆရာ လမ်းညွှန်လိုက်တယ်။
ဆရာက လမ်းညွှန်မှု သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဂျူးနဲ့ ပုလဲတုိ့လည်းဗြိတိသျှကောင်စီ (B.C) Advance English မှ နှင့် ကွန်ပျူတာ ၄ နှစ်လုံးလုံး သွားတက်ကြတာ။ အတော် အကျိုးရှိပါတယ်။ ကျွန်မ ဆရာ့တွေ့တိုင်း တစ်နေ့နေ့ ဆရာ အတ္ထုပ္ပတ္တိရေးမယ် ပြောတော့-
“ကျွန်တော့်အကြောင်း ရေးမယ့်အစား ဆရာမဟာဆွေ အကြောင်းရေးပါ။ ကိုအောင်တို့စာပေအားသစ် မှာ မဟာဆွေ(သို့မဟုတ်)ရဲရဲ တောက်နေသူရိန် ကြော်ငြာ ထားတယ် မဟုတ်လား”
“မထွက်လောက်ဘူး ထင်တယ်။ ပြုံးစာပေက “မဟာဆွေရဲ့ မဟာဆွေ” စာအုပ်တင်တာ ခွင့်ပြုချက် မရဘူး”
“အဲဒါ ခက်နေတာပဲ။ ကိုလိုနီခေတ်က အကြောင်း တွေ ဘာဖြစ်လို့ မလွတ်ရမှာ လဲ။ ဆက်တင်ကြည့်ပါဦး”
ဆရာ သက်ပြင်းချနေတယ်။ ဒါပေ မဲ့ ဆရာ့အသံ တက်ကြွနေတယ်။ အသံက အောင်မြင်တယ်။ အောက်ဆီဂျင်နှင့် မနေရသေးတဲ့ ကာလတွေပေါ့။
ကျွန်မ ဆရာလင်းယုန်မောင်မောင် ရေးတဲ့ ချေဂွေဗားရား စာအုပ်ဖတ်ဆဲ-
“ဆရာပေးဆပ်မှုဟာ ချေတဲ့ကောင် များတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရေးချင်တာ”
ဆရာ ဦးစိန်ဝင်းက သူ့ကိုယ်သူ နှိမ့်ချတဲ့ လေသံနှင့် ပြောလိုက်တယ်။ ၁၃ သြဂုတ်လဟာ ဆရာ့မွေးနေ့လို့ စာရေး ဆရာမ မိချမ်းဝေပြောလို့ သိခဲ့ရပါတယ်။ သူ ဆရာ့အိမ် သွားမလို့တဲ့။ ကျွန်မလည်း မှတ်မှတ်ရရ ကဗျာတစ်ပုဒ် အင်္ဂလိပ် ဘာသာနဲ့ရေးပြီး ပေးပို့လိုက်သေးတယ်။
To Dear Saya,
I ever appreciate you for your sacrifices,
I know many episodes minute by minute in prison.
All the victims suffered worst than the reign of terror.
Heroes in the pitch black, world of darkness.
The most valuable deeds. You have done.
ကျွန်မ ဆရာ့အနစ်နာခံ ပေးဆပ်မှု တွေကို အမြဲလေးစားတန်ဖိုးထားပါ တယ်။
အကျဉ်းထောင်ထဲ မိနစ်တိုင်းဖြစ် နေတာတွေ ကျွန်မ သိပါတယ်။
အနှိပ်ကွပ်ခံရသူများ ကြောက်မက် ဖွယ် ဥရောပ ပဒေသရာဇ်ခေတ် နှိပ်စက် မှုတွေထက်ပိုခံရပါတယ်။
ထောင်များမှာ နက်မှောင်တဲ့ အမှောင်ကမ္ဘာက သူရဲကောင်းတွေကို ဂုဏ်ပြုနေပါတယ်။
အကျဉ်းသား ရဲဘော်တို့ တန်ဖိုးကြီး လှတဲ့ လုပ်ရပ်တွေဆိုတာ သေချာလှပေါ့။
(ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်း၊ဩဂုတ်လ ၂၀၁၂)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:26 AM No comments:
အချိုမှုန့် စားခြင်း၏ အန္တရာယ်
by Moe Myat on Sunday, July 29, 2012 at 10:13am ·
ကျမ ငယ်ငယ်ကအဖွားက ပြောဘူးတယ်.. အသား၊ အသီး ၊ အရွက်အားလုံးထဲမှာ သူ့ ဓာတ်နဲ့ သူ အချိုဓာတ် ဗီတာမင်က ပါပြီးသားပဲတဲ့ ခေတ်မြန်မာများ အချိုမှုန့် သုံးသည်ကို သူနားမလည်နိုင်ဖြစ်မိတယ်တဲ့..... တောသူလည်းဖြစ် သူတို့ ခေတ်ကလည်း အချိုမှုန့် မပေါ်သေးတော့ အချိုမှုန့် နှင့် သူတို့ မအပ်စပ်သည်ကို ကျမနားလည်မိတယ်..။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အမေချက်တာ သူများတွေချက်တာ စားခဲ့ရတော့ ချေးများလို့မရပါ.. အရွယ်ရောက်လို့ ကိုယ့်အိမ်နဲ့ ကိုယ်နေ လို့ ရတော့ ကျမ မစားခြင်တဲ့အချိုမှုန့် ကိုကျမ လွတ်လပ်စွာ မသုံးခွင့် ရခဲ့ တာကြောင့် ကျမ အခုဆို အချိုမှုန့် မစားတာ ၈နှစ် ရှိပါပြီ။ မြန်မာတွေက ဟင်းချက်တယ်ဆုိုတာနဲ့ အချိုမှုန့် ၊ ဆား၊ ငံပြာရည် ဆုိုတာ တွဲပြောတတ်တာလေ..
တခါတလေ အိမ်မှာ သူငယ်ချင်းများလာလည်လျှင် မီးဖုိုချောင်မှာ အချိုမှုန့် မရှိသည်က သူတို့ အတွက် ပြသနာ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ကျမကလည်းမစားတာကြာလာတော့ ဟင်းတခုကိုစားကြည့်လုိုက်တာနဲ့ အချိုမှုန့် ဘယ်လောက်များများ သုံးထားတာ တန်းသိတယ် (ကိုယ်တိုင်သာ ဟင်းမချက်တတ်တာပါ) :P .......
တချို့ များဆုိုလျှင် ၄ယောက်စာလောက်စားတဲ့ ဟင်းအိုးတအိုးကို အချိုမှုန့် ဇွန်းကြီး၂ဇွန်းလောက်ခတ်ကြတယ်... ဘုရားဘုရား.. အချိုမှုန့် စားမှာလား..ဟင်းစားမှာလားလို့ ကျမပြောမိတယ်.....
ကျမကိုယ်တုိုင်လည်းမစား.. မိတ်ဆွေများကိုလည်း အချိုမှုန့် သုံးခြင်း၏ ဥပါဒ်ကို သိအောင် Mg Mandalay ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်...။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:16 AM No comments:
အသင်းအဖွဲ့များပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် အနာဂတ်မြန်မာပြည် ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကို ဇူလိုင်လ ၂၈ရက်နေ့ကဗဟန်းမြို့နယ် တော်ဝင်နှင်းဆီစားသောက်ဆိုင်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်
အသင်းအဖွဲ့များပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် အနာဂတ်မြန်မာပြည် ဆွေးနွေးစကားဝိုင်းများ အစီအစဉ် အမှတ် ၃ကို
ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၈ရက် စနေနေ့ နေ့လည် ၂နာရီမှ ၄နာရီထိ ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ်
ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပရဟိတလုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်လှုပ်ရှားနေသည့် စာရေးဆရာမ သန်းမြင့်အောင်က
"ပရဟိတနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး" ဟူသည့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆရာမက ပရဟိတလုပ်ငန်းများ
လုပ်ကိုင်နေသူတွေဟာ နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေးအခြေအနေဆိုးများကြောင့် မိမိတို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀နှင့်
စားဝတ်နေရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးတို့တွင် နိမ့်ကျဆင်းရဲပြီး မငြိမ်းချမ်းနိုင်သောသူများကို ကူညီနေခြင်းဖြစ်၍
ငြိမ်းချမ်းရေးကို တထောင့်တနေရာက ဖော်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ စစ်ဖြစ်မှမငြိမ်းချမ်းတာမဟုတ်
စီးပွားရေး၊နိုင်ငံရေး၊လူမှုရေးဖိနှိပ်မှုများကြောင့် ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက် ငိုကြွေးနေကြရတာလည်း မငြိမ်းချမ်းတာပါပဲ
ဟုလည်းဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံရေးနှင့် ပရဟိတ ဆက်စပ်မှုရှိပါသလားဆိုသည့် ပရိတ်သတ်တဦး၏
မေးခွန်းကိုလည်း "ပရဟိတဆိုတာ အများကောင်းကျိုးလုပ်နေတာပါ၊ နိုင်ငံသားတွေလိုအပ်နေတာကိုလုပ်ပေးနေတာ၊
နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးကိုလုပ်ပေးနေတာ မို့ နိုင်ငံရေးပါပဲဟု" ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့
တက်ရောက်လာကြသော ပရိသတ်များထဲမှလည်း အပြန်အလှန်မေးခွန်းများမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ယနေ့ဆွေးနွေးပွဲတွင် အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် ကိုမြင့်မိုးအောင်ရေးသားသော ငြိမ်းချမ်းရေးတေးသံ သီချင်းကိုဖွင့်ခဲ့ပြီး
တက်ရောက်လာသူအားလုံးက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ငြိမ်သက်စွာအာရုံပြုဆုတောင်းခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် အဖွဲ့အစည်းမိတ်ဆက်အစီအစဉ်အဖြစ် Generation Wave (မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ) အဖွဲ့၏
ပူးတွဲတည်ထောင်သူတဦးဖြစ်သည့်ကိုမိုဃ်းသွေးက ၂၀၀၇ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု အပြီးအောက်တိုဘာလကတည်းက
မြေအောက်ပုံစံဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်အစိုးရ၏ဖိနှိပ်မှုများအောက်တွင် လှုပ်ရှားမှုများဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး
ယနေ့အထိ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ အစုအဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေသောGeneration Wave
(မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ)အဖွဲ့၏အကြောင်းကို အကျဉ်းချုံးမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။
ဒေါင်းမာန်ဟုန်မှနှင့်ဟံသာဝတီ မှအထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်...
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:46 AM No comments:
ကိုချိုတူးဇော် ၏ ၈၈၈၈ မော်ကွန်း
၈၈၈၈ သမိုင်းဆိုတာ မြန်မာပြည်ရဲ့ လှည်းနေ၊ လှေအောင်း၊ မြင်းဇောင်းမကျန် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူအုံကြွမှုသမိုင်းစစ်စစ်ပါ။ ဒီ့မတိုင့်မီက မြန်မာပြည်သမိုင်းမှာ
၁၃၀၀ ပြည့်အရေးတော်ပုံ တုန်းက တကြိမ်၊
၁၉၄၆ အထွေထွေသပိတ်ကြီး မှာ တကြိမ်၊
ပြည်သူလူထု ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အထွေထွေ သပိတ်ကြီးတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် ၈၈၈၈ လောက်တော့ လူထုပါဝင်မှု မကြီးကျယ်၊ မခမ်းနားခဲ့ပါဘူး။
၈၈၈၈ ကတော့ မြန်မာပြည်အနှံ့မြို့သေး၊ မြို့မွှား၊ မြို့သိမ်၊ မြို့ငယ်လေးတွေပါမကျန်
၂၆ နှစ်လုံးလုံး တိုင်းပြည်ကြီး အဘက်ဘက်က အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်စေခဲ့တဲ့
တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကို ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက မလိုချင်တော့ပါဘူး လို့
တခဲနက် ထုတ်ဖေါ်ပြသလိုက်တဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ အဘက်ဘက်မှာ နောက်ကျချင်နောက်ကျမယ်၊ နိုင်ငံရေးအမြင်မှာ နောက်မကျဘူးဆို
တာ ကမ္ဘာကို ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ “ထွန်းပြောင်လှတဲ့ မြန်မာ့သမိုင်း မှတ်တိုင်” တခုပါ။
မြန်မာတို့ရဲ့ ၈၈၈၈ နောက်မှာမှ တရုတ်ပြည်မှာ တီယန်မင် ရင်ပြင်အရေးအခင်း၊ ဘာလင်တံတိုင်းဖြိုချမှု၊ ဆိုဗီယက်အင်ပါယာ ပြိုကွဲမှု၊ ဗီယက်နမ်အပြောင်းအလဲ စတဲ့
တကမ္ဘာလုံး လက်ဝဲနိုင်ငံတွေအားလုံး ပြောင်းလဲမှုတွေ ဆင့်ကဲ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး အမြင်၊ နိုင်ငံရေးရေချိန်ဟာ ကမ္ဘာထက်မသာရင်တောင်၊
နောက်ကျမနေဘူးဆိုတာ ပြသနိုင်တဲ့ သဘောပါ။
ဒီလို ၈၈၈၈ သမိုင်းကို သာမန် ကျောင်းသားတွေ ရန်ပွဲက အခြေအမြစ်မရှိ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဆင့်အတန်းမရှိ ဆူပူမှုလို့ လုပ်ကြံဖန်တီးတာဟာ မြန်မာ့သမိုင်း ကို လုပ်ကြံဖန်တီးတာ။
မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံး၊ တမျိုးသားလုံး ကို လုပ်ကြံဖန်တီးတာ။
တပ်မတော် ဟာ ၈၈ မှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေအနေတွေ ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ၂၃ နှစ်ကြာအောင် အာဏာကို အုပ်စီးခဲ့တယ်။ အမျိုးသားညီလာခံ ကို နှစ် ၂၀ ကျော် ကြာအောင်ကျင်းပပြီး
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကို ပြည်သူ့ဆန္ဒမပါဘဲ ရေးဆွဲခဲ့တယ်။
၂၃ နှစ်တာ ကြာအောင် အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ရလာဒ်က မြန်မာပြည်ဟာ ပိုလို့ များပြားတဲ့ကြွေးမြီတွေအပြင်၊ ပြည်သူလူထုအများစု ရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ၊ အကျင့်စာရိတ္တတွေ ဟာ ပိုလို့နိမ့်ပါးပျက်စီးသွားခဲ့ရတာပါပဲ။
စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကတော့ အရမ်းကို ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ချမ်းသာကြွယ်ဝ ခဲ့ကြပါတယ်။
တကယ်လို့သာ ၈၈ အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီး တပ်မတော်သာ အနေမှန်မယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘဏ္ဍာတွေကို အလွဲသုံးစားမလုပ်ဘူး၊ ပြည်သူလူထုကို ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွေ တကယ့်ကို ဖေါ်ဆောင်ပေးခဲ့မယ် ဆိုရင် တပ်မတော် ကို ဘယ်သူမှ ဒီလောက် မုန်းတီးစက်ဆုတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ခုချိန်မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြိုတင်မဲများစွာနဲ့ ကြံ့ဖွံ့က လုပ်ကြံတဖက်သတ်အနိုင်ယူခဲ့တဲ့
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူက စစ်အစိုးရကို ကြံ့ဖွံ့ကို အရင် မဆလအာဏာရှင်ဟောင်း တစည တွေထက်တောင် မုန်းတယ် ဆိုတာ လက်တွေ့ သက်သေ ပြခဲ့ပါလေရဲ့။
အချုပ်အားဖြင့်တော့ ၈၈၈၈ ဆိုတာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ နိုင်ငံရေး အမြင်မနိမ့်ပါဘူး ဆိုတာပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာတခြမ်းပြောင်းလဲရေး ကဏ္ဍမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့သမိုင်းထွန်းပြောင်လှတဲ့ လူထုတော်လှန်ရေး ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလူကပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လို အဖွဲ့အစည်းကပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၈၈၈၈ ကို သေးသိမ်အောင် လုပ်ကြံဖန်တီးလို့မရဘူး ဆိုတာပါပဲ။
by Victor Tan on Saturday, July 28, 2012 at 4:09pm ·
လူမှုရေး နိုင်ငံရေး ဆို ထားဘိ
သာသနာရေးမှာပင် စိစစ်ရေးက ၀င်ပါပြီး
ဇာတ်တော်လာ ယုန်မင်း ၀တ္ထုမှာ
ရွတ်မိ ဟောမိခဲ့တဲ့ ကိုယ်တော်ခမျာ
ရင်ဝမှာမြှားစူး သွေးလူးလူးနဲ့ပုံ ဆွဲမိလို့
အမြင်မှာရိုးပေမဲ့ ကလောင်က မရိုးဘူး
အတိကျ အကောင်ပြ ထောင်ချလိုက်ပုံက
“နာမည်တောင် မမြင်ချင်ဘူး တဲ့
တက္ကသိုလ်ဘုန်းကြွယ် (ဇူလိုင် ၂၉ ၂၀၁၂)
တင်မိုး (၁၃၊ ၉၊ ၂၀၀၂)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 8:56 AM No comments:
အလုပ်လက်မဲ့အခြေအနေ ဆိုးရွားနေကြောင်း တောင်သူတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတင်ပြ
အလုပ်လက်မဲ့အခြေအနေ ဆိုးရွားနေကြောင်း တောင်သူတွေက
နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးကို ဒီကနေ့ သွားရောက်ခဲ့တဲ့ NLD ဥက္ကဋ္ဌ ကော့မှုးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒေသခံ တောင်သူလယ်သမားတွေက မိမိတို့လယ်ယာမြေတွေ အသိမ်းခံခဲ့ရတာကြောင့် လယ်မဲ့ယာမဲ့အပြင် အလုပ်လက်မဲ့တွေအဖြစ် ဘ၀အခြေအနေတွေ ပိုမိုဆိုးရွားနေကြောင်း တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ အတူလိုက်ပါသွားတဲ့ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်ပြည်သူ့
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇေယျသော်ပြောပြတာက -
"လောလောဆယ် ဘာတွေအခက်အခဲရှိသလဲ၊ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ ဆိုတာကိုပဲ အဓိက မေးမြန်းတာပါ။ ဒေသခံတွေ အဓိပြောတာကလည်း လယ်ယာမြေတွေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အသိမ်းခံထားရတဲ့အတွက် အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာက အများဆုံးပဲလို့ ပြောပြကြပါတယ်။"
တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် အလုပ်အကိုင်
ပြန်လည်ရရှိရေးဟာ အဓိက ဦးစားပေး ဖြေရှင်းရမယ့် အဆင့်ဖြစ်နေတယ်
လို့လည်း ဦးဇေယျသော်က ပြောပါတယ်။
"လယ်ယာမြေ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ လယ်သမားတွေရဲ့ နစ်နာမှု အတွက် တရားမျှတမှု ရှိအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရာမှာ လွှတ်တော်ထဲမှာ
ကော်မရှင်တခုအနေနဲ့ ဖွဲ့ပြီး စတင်စုံစမ်းမယ် ဆိုတဲ့ အဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့က လယ်ယာမြေ ပြန်ရဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစားပြန်ရဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီအရာတွေကို ဒုတိယတန်းစား ဦးစားပေး အနေနဲ့ ထားပြီး အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့ တောင်သူတွေ လူငယ်တွေ အတွက် အလုပ်အကိုင် ရရှိမယ့် အခွင့်အလမ်းတွေကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေး မလဲ ဆိုတာကို အဓိက ဦးစားပေး အနေနဲ့ တိုင်ပင် ဆွေးနွေး ဖြစ်ပါတယ်။"
ပျဉ်းမနား နေပြည်တော်က လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်နေ
တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ NLD ဌာနချုပ်ရုံးခွဲ ဖွင့်လှစ်မယ့် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်က ရုံးခန်း အခြေအနေကိုလည်း တဆက်တည်း သွားရောက်
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 8:47 AM No comments:
Myo Thein (BDC)
အခုဆိုရင် ကျုပ်တို့အိမ်ထဲက လူတွေကိုတောင်
သူတို့ကိုယ်တိုင်က အဲဒီခွေးရန်က ရှောင်ကွင်းနေရ၊
အဲဒီခွေးတွေကို မောင်းထုတ်နေရ လုပ်နေရပါလျှက်နဲ့
ရိုက်လိုက်ရင်သာ အများက ၀ိုင်းသနားကြ၊
မစာနာဘူး ဘာညာနဲ့ ၀ိုင်းပြီးတော့
ရလာတဲ့ဒါဏ်ရာကျတော့ လျှော်ကြေးပေးဖို့ ပိုင်ရှင်ပေါ်မလာတော့ဘူး၊
အဲဒီခွေးလေခွေးလွင့်တွေကို သနားတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလဲပျောက်၊ တိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေးဘာညာဆိုတဲ့သူတွေလဲပျောက်၊
စာနာညှာတာ စိုးရိမ်တဲ့သူတွေလဲ ပျောက်...
တိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေး ဘာညာသာ အော်နေတာ
သူတို့အချင်းချင်းသာ မတည့်ပြီးတော့ ကိုက်နေတတ်ကြတာ....
တိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေးလို့ ပြောတဲ့သူကို မွှးမလားဆိုတော့
စာနာပါ၊ ညှာတာပါ၊ သနားပါ လို့ ပြောနေတဲ့သူကို
လုံအောင်ကာထားရတယ်..[Received from email] lol
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 8:26 AM No comments:
ရေးသူ - ခင်ငြိမ်းသစ်
ကြယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင် အလင်းရောင်ရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ နေရာဟာ မြင့်မားတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးပဲ။ ရာသီဥတု ကြည်လင်တဲ့ ညတွေဆိုရင် အရောင်လက်နေတဲ့ ကြယ်တွေဟာ စိန်တွေလိုပဲ တဖျပ်ဖျပ် လက်နေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိကြသလို၊ မြင်လည်း မြင်ဖူးကြပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့သည့် ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က သေနတ်မှန်ထားသော ကျောင်းသူလေးကို သယ်ယူပြေးလွှားနေသည့် ဒေါက်တာ စောလွင်နှင့် ဒေါက်တာ မင်းသိန်း
ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာ ရှိတဲ့လူငယ်များစွာဟာလည်း ကြယ်တွေလိုပါပဲ။ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း အထင်အရှားရှိကြတယ်။ ဉာဏ်ပညာ ထက်မြက်တယ်။ စိတ်ဓာတ်မြင့်မားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀မ်းနည်းဖို့ ကောင်းတာက အဲ့ဒီကြယ် တွေဟာ တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ ကြွေနေတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမက ကြယ်တွေ ကြွေနေတဲ့ တိုင်းပြည်လို့ နာမည်ပေးထားတယ်။
၁၉၈၈ ခု စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက် နေ့က အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတိုင်းမြင်ဖူးပြီးသား ဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ပုံ တပုံ အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။
အဲဒီ ဓာတ်ပုံက သေနတ်မှန်ပြီး ဒဏ်ရာရနေတဲ့ အင်္ကျီအဖြူ လုံချည်အစိမ်းနဲ့ ကျောင်းသူလေးကို ဂျူတီကုတ်အဖြူဝတ် ထားတဲ့ ဆရာဝန်နှစ်ဦးက ဆွဲပြေးနေတဲ့ပုံပါ။ ဒီဓာတ်ပုံကိုမမြင်ဘူးတဲ့လူမရှိပါဘူး။ မြင်တဲ့လူတိုင်း ခံပြင်းဒေါသ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။ အဲဒီဓာတ်ပုံထဲက ဆရာဝန်နှစ်ဦး ဘယ်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာ သိတဲ့လူနည်းမယ်လို့လည်း ကျမထင်ပါ တယ်။
ရှေ့ကနေကျောင်းသူလေးရဲ့ ခြေထောက်ကို ဆွဲမထားတဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ နာမည်က ဒေါက်တာစောလွင်၊ ခေါင်းကိုမထား တဲ့ ဆရာဝန်က ဒေါက်တာမင်းသိန်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာ ပညာချွန်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒေါက်တာစောလွင်ဟာ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲအောင်တုန်းက သင်္ဃန်ကျွန်းတမြို့နယ်လုံးမှာ ပထမ ရခဲ့ပါတယ်။ သူ့အစ်မ ကလည်း ဆရာဝန်ပါပဲ။
ဒေါက်တာမင်းသိန်းကလည်း ဆေးကျောင်းမှာ ထိပ်တန်းကကျောင်းသားပါ၊ သူ့ညီ ကိုဝင်းသိန်းလည်း ဆရာဝန် တယောက် ပါပဲ၊ သူတို့ရဲ့ဖခင်ကလည်း ဌာနတခုကညွှန်ကြားရေးမှူး အဆင့်ရှိတဲ့သူပါ။
ဒေါက်တာမင်းသိန်းဟာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာ တောခိုသွားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား များ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး(ABSDF) မှာဆေးမှူးတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး တာဝန်နဲ့ ပြည်တွင်းကို ပြန်ရောက်ခဲ့ပါ တယ်။
အဲဒီ အချိန်အတွင်းမှာပဲ ဗိုလ်ချူပ်ခင်ညွန့်က တောတွင်းက ပြန်ရောက်လာသူတွေအနေနဲ့ န၀တ ကို သတင်းပို့ဖို့ လိုကြောင်း၊ သတင်းပို့လာခဲ့လျှင် အရေးမယူပါကြောင်း သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကနေ ပြောတာကြောင့်စိုးရိမ်တတ်တဲ့ ဒေါက်တာမင်းသိန်းရဲ့ အဖေက သူကိုယ်တိုင်စစ်ဒေသကို အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ စစ်ဆေးဖို့ မခေါ်ခင်မှာ ဒေါက်တာ မင်းသိန်း က ဒေါက်တာ စောလွင်ကို သူတာဝန်နဲ့ ပြန်လာကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ နောက်တနေ့မှာ ဒေါက်တာမင်းသိန်းကိုမေးမြန်း စရာရှိတယ်ဆိုပြီး ခေါ်သွားပါတော့တယ်။
တပတ်လောက်ကြာတော့ ဒေါက်တာမင်းသိန်းကို ထောက်လှမ်းရေးစခန်းကနေ ပြန်လာပို့ပေးပါတယ်၊ မိဘတွေဆီ သေချာအပ်နှံသွားခဲ့ပါတယ်၊ သို့သော်လည်း ဒေါက်တာ မင်းသိန်းတယောက် ခြေလက်တွေဖောယောင်ပြီး ဆီးမသွား နိုင်တော့ပါ၊ ဒါကြောင့် ကိုဝင်းသိန်း (ဒေါက်တာ မင်းသိန်းရဲ့ညီ)က ဒေါက်တာ စောလွင်တို့ မောင်နှမကို အကြောင်း ကြားခဲ့ပါတယ်၊ ဒေါက်တာ စောလွင်ရောက်လာတော့ ဒေါက်တာ မင်းသိန်းက ပြောပြပါတယ်။ သူ့ကို ထောက်လှမ်းရေး က ဆေးတလုံး ထိုးပေးလိုက်တယ်တဲ့၊ ဘာဆေးလဲဆိုတာတော့ မပြောဘူးတဲ့၊ သူအခုဖြစ်နေတာတွေက အဲဒီ ဆေးကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုသူ ဗိုက်ကြီးတင်းနေပြီး အသက်ရှုရတာ ကြပ်နေတယ်လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာစောလွင်နဲ့ ကိုဝင်းသိန်းကဆေးရုံတင်ဖို့ စီစဉ်နေစဉ်မှာပဲ ထောက်လှမ်းရေးက ဆေရုံတင်မယ်ဆိုရင် စစ်ဆေးရုံကိုပဲ တင်ခွင့်ရှိကြောင်း၊ စစ်ဆေးရုံမှာကုသဖို့ စီစဉ်ထားကြောင်း အကြောင်းကြားလာပါတယ်။ ဒေါက်တာ မင်းသိန်းက စစ်ဆေးရုံမှာဆိုရင် ဆေးကုမခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီး အိမ်မှာပဲနေမယ်လို့ ပြောပါတယ်၊ အဲဒါနဲ့ ဒေါက်တာ စောလွင်နဲ့ ကိုဝင်းသိန်းတို့ကပဲ ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာ မင်းသိန်းဟာ ဘယ်ဆေးရုံကိုမှ တက်ရောက်ကုသခြင်း မရှိခဲ့ဘဲနောက်တနေ့မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာ မင်းသိန်းဆုံးလျှင်ဆုံးခြင်း ဒေါက်တာ စောလွင်နဲ့ ကိုဝင်းသိန်းတို့က သူတို့ရဲ့ ဆရာ ဆရာဝန်ကြီး တဦးကို အကြောင်းကြားပြီး အဲဒီ ဆရာကြီးနဲ့အတူ ရင်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်၊ အဖြေကတော့ ကျောက်ကပ် အရမ်းကြုံ့သွား တာတဲ့။ ဒေါက်တာ စောလွင်တို့က မျက်မြင်သက်သေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကို သိသွားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးက ရင်ခွဲ စစ်ဆေးတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးကိုမပေါက် ကြားစေရပါဘူးဆိုပြီး လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့လို့ ထိုးခဲ့ရပြီး ဒေါက်တာ စောလွင်က တော့ ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။
ဒေါက်တာ စောလွင်ထွက်ပြေးရတဲ့အတွက် သူ့ကို အားထားနေရတဲ့ ဆင်းရဲသားလူနာတွေ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတာ ကျမမျက်မြင်ပါ၊ အဲဒီအချိန်က ဒေါက်တာစောလွင်ဆေးခန်းမှာ ကျမကူလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်၊ ဆင်းရဲတဲ့လူနာတွေကို ပိုက်ဆံမယူတဲ့အပြင် သူ့ရဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပါ ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ ကင်ဆာ ဝေဒနာရှင် တဦးကိုလည်း ဆေးဖိုးဝါးခ အကုန်ခံပြီး ဆေးကုသ ပေးခဲ့တာကျမရှေ့တင်ပါ။
၁၉၉၄ ခုနှစ်ထဲမှာ ဒေါက်တာ စောလွင်ကြောင့် ပင်စင်ပေးခံခဲ့ရတဲ့ သူ့ရဲ့အဖေနှလုံးရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ တိမ်းရှောင်နေတဲ့ ဒေါက်တာစောလွင်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်၊ ဘာမှထူးခြားမှုမရှိတဲ့အတွက် ထောက်လှမ်းရေး မေ့နေလောက်ပြီဆိုပြီး အစိုးရဆေးရုံမှာ အလုပ်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်း ဘိုကလေးမြို့နယ် အတွင်းက တိုက်နယ်ဆေးရုံတရုံမှာ တာဝန်ကျခဲ့ပါတယ်၊ အစပိုင်းမှာ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ထောက်လှမ်းရေး က မကြာခဏ စစ်ဆေး မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်ထဲမှာ စစ်မေးတာ ပိုစိပ်လာပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်လည်း ပိုဖြစ်လာပါတယ်၊ မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေတ္တ လွတ်မြောက်စဉ်မှာ တွေ့ရအောင် ခွင့်ယူပြီးရန်ကုန်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် အန်တီနဲ့ မတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့် ဘိုကလေးကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘိုကလေးကို ရောက်ရောက်ချင်း မ၀တ အတွင်း ရေးမှူးက ခေါ်လို့သွားတဲ့အခါမှာ မ၀တ ရုံးခန်းတွင်း စစ်ထောက်လှမ်းရေး ၃ ယောက်နဲ့ အချိန်အတော်ကြာ တွေ့ဆုံခဲ့ ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဒေါက်တာ စောလွင်တယောက် ညှိုးညှိုးငယ်ငယ်နဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
အတူနေသူတွေရဲ့ ပြောပြချက်အရ ဒေါက်တာ စောလွင်ဟာ စိတ်ဒုက္ခရောက်စရာရှိနေပုံ ရပါတယ်၊ သိသိသာသာ စကားနည်းသွားတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ မေးရင်လည်း စကားလွှဲသွားပြီး ဘာမှသေချာမပြောခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလို မပြောတာကလဲဘယ်သူ့ကိုမှ သူလိုမဖြစ်စေချင်လို့ မပြောတာလို့ ယူဆရပါတယ်။
အဲဒီနောက် ခွင့်ဆက်ယူပြီး ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းနေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် နောက်၂ ရက်အကြာမှာ ဆရာ ဒေါက်တာ စောလွင် အခန်းက တိတ်ဆိတ်နေပြီး လှုပ်ရှားသံမကြားရလို့ အတူနေသူတွေက စိုးရိမ်ပြီး တခါးဖျက်ဝင်ခဲ့ရာ သူ့ကိုယ်သူ ဆွဲကြိုးချ သတ်သေနေခဲ့ပါတယ်။ ဆရာ သေဆုံးရခြင်း အတွက် ကျမတကယ် နှမြောဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ ဆရာဟာ လူတော်လူကောင်းတဦးပါ။
ကျမတို့ ဗမာပြည်မှာကြယ်တွေကြွေနေပါတယ်၊ ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိပါသလဲ၊ အဖိုးတန် သားတွေဆုံးရှုံးရတဲ့ မိဘ တွေရဲ့ခံစားချက်က ဘယ်လောက်များနာကျင်နေမလဲ၊ ကျမတို့ရဲ့အဖိုးတန် လူငယ်တွေ ဘယ်လောက်အထိများ ဆုံးရှုံးနေရဦးမှာလဲ……။
ဒီဆောင်းပါးနဲ့ အညတြ သူရဲကောင်းများကို ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်။.........
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 8:20 AM2comments:
''ဒီမို ၁၀ ပါတီ သဘောထားကြေညာချက် ရခိုင်ပါတီလက်မခံ ၊ ပြည်သူအချို့ကဝေဖန်''
လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် တစ်ပါတီတည်းအနိုင်ရမှုကိုကာကွယ်ရန် ရွေးကောက်ပွဲစံနစ်ပြုပြင်ရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေပါတီများက
သဘောထားကြေည်ာချက်တစ်ရပ်ကို ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဇူလိုင် ၂၇ ရက်နေ့က ဒီမို ၁၀ ပါတီနှင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တို့ နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ယင်းသုို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
"ေ၇ွးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဒါကိုလွှတ်တော်တင်ပြမယ်ပေါ့။ ပါတီတွေနဲ့ ပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်လာအောင်လုပ်ပါဆိုပြီးပြောတယ်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ
တိုးတက်ရေးပါတီကတော့ ဒီသဘောထားကြေညာချက်ကို လက်မခံပါဘူး " ဟု ဒီမိုမိတ်ဆွေပါတီတစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
အဆိုပါသဘောထားကြေညာချက်ကို ဖတ်ရှုသိရှိပြီးသူများကလည်း လက်မခံကြောင်းဖြင့် ဝေဖန်ပြောကြားကြသည်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 7:52 AM No comments:
The Voice Journal july 30
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 7:44 AM No comments:
ဦးအောင်သိန်းလင်းက Southern Weekend သတင်းစာသို့ ဖြေကြားမှုကို စိစစ်လျက်ရှိပြီး တွေ့ရှိချက်ပေါ်မူတည်၍ ပါတီ၏ စည်းကမ်းအရ ဆက်လက်အရေးယူမည်ဟုဆို
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် - ၂၈
တရုတ်နိုင်ငံတွင် အပတ်စဉ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိသော Southern Weekend (China) သတင်းစာတွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးအောင်သိန်းလင်းတို့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်ကို အင်တာနက်တွင် ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပြီး ပြည်တွင်းဂျာနယ်အချို့၌လည်း ဖော်ပြလျက်ရှိရာ ဦးအောင်သိန်းလင်းက ထိုဖော်ပြချက်များအတိုင်း အမှန်တကယ် ပြောကြားခြင်းရှိ၊ မရှိကို စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ တွေ့ရှိချက်အပေါ်မူတည်၍ ပါတီစည်းကမ်းအရ ဆက်လက်အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ယနေ့(ဇူလိုင် ၂၈ရက်) ရက်စွဲဖြင့် တရားဝင်ကြေညာသည်။
ဦးအောင်သိန်းလင်းက အမှန်တကယ် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါက ၄င်း၏ ပုဂ္ဂလိကပြောဆိုချက်များသာဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ သဘောထားများမဟုတ်ကြောင်းလည်း ကြေညာချက်တွင်ပါရှိသည်။
(၁) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးအောင်သိန်းလင်းနှင့် Southern Weekend (China) ဟု ဖော်ပြထားသော တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု ရေးသားဖော်ပြချက်များအား Internet စာမျက်နှာများပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းရှိ ဂျာနယ်များတွင်လည်းကောင်း ဖော်ပြလျက်ရှိနေကြပြီး အဆိုပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းမှုများလည်း ရှိနေကြပါသည်။
(၂) အဆိုပါ ရေးသားဖော်ပြချက်များသည် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးအောင်သိန်းလင်းမှ အမှန်တကယ် ပြောကြားခဲ့မှုများ ဖြစ်ပါက ဦးအောင်သိန်းလင်း၏ ပုဂ္ဂလိက ပြောဆိုချက်များသာဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ သဘောထားများ မဟုတ်ပါ။
(၃) ဦးအောင်သိန်းလင်းအနေနှင့် အမှန်တကယ် ပြောကြားခြင်းရှိ၊ မရှိကိုလည်း စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ တွေ့ရှိချက်များအပေါ် မူတည်၍ ပါတီစည်းကမ်းအရ ဆက်လက်အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်ဟု ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:55 AM No comments:
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေပြည်တော် (NLD) ရုံးသို့ လာရောက်စဉ် (၂၈.၇.၂၀၁၂)-ဓာတ်ပုံ
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:41 AM No comments:
Saturday, July 28, 2012 Sithu Linn
ဒီတခေါက် Face to Face အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်သူကတော့ ၀ါရင့်သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဝင်တင်ပြောပြတဲ့ စာနယ်ဇင်း အတွေ့အကြုံ၊ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် နဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတို့ကို ကြားသိရမှာပါ။
ဧရာဝတီရုပ်သံမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ ဗျို့ 
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:50 PM No comments:
by Moe Myat on Wednesday, July 25, 2012 at 8:49pm ·
ခန္တီ မေတ္တာ ပိုင်ရှင်
Burma Project USA ကို တည်ထောင်သူ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေးကျွမ်းကျင်သူနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် (များသောအားဖြင့်) ရဟန်းဘ၀ဖြင့် ( ၈ )နှစ်တာ နေထိုင်ခဲ့ဖူးသည့် မစ္စတာ အလန် ကလီးမင့်ထ်စ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စကားပြောဖြစ်ခဲ့သည်များကို Comversation with Aung San Su Kyi ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Shambhala Sun, September 1997 တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ထင်ရှားသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး၏ ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်များကို သိရှိနိုင်စေရန် မိတ်ဆက်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
အလန်ကလီးမင့်ထ်စ်။ ။ “ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးနှစ်ရပ်လုံးအတွက် ကျွန်တော်ပို့ ချနေခဲ့တဲ့ နှစ်တွေအတွင်းမှာ ကျွန်တော်နဲ့ တွေ့သမျှလူတွေအားလုံးက ခင်ဗျားကို သူရဲကောင်းဆိုတဲ့ ဝေါဟာရတွေနဲ့ တံဆိပ်တပ်ချင်နေကြတယ်ဗျ၊ ခင်ဗျားနဲ့ အင်တာဗျူးတဲ့ Vanity Fair ကတော့ ခင်ဗျားကို “မြန်မာ့စိန့်ဂျုန်း” လို့တောင် မျက်နှာဖုံးကမ္ဗည်းထိုးထားပါပကော။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ “ဘုရား ဘုရား၊ ကျွန်မ အဲလိုမမျှော်လင့်ရပါလားရှင်။”
အလန်ကလီးမင့်ထ်စ်။ ။ “တိတိကျကျဗုဒ္ဓဘာသာဝေါဟာရနဲ့ ပြောရင်တော့ ခင်ဗျားဟာ ဗုဒ္ဓဘုရားအဖြစ် ရောက်ရှိဖို့အတွက် အခြားသူတွေ လွတ်မြောက်မှုရရှိကြပါစေ ဆိုတဲ့ စေတနာဆန္ဒတွေနဲ့ ပညာပါရမီ၊ ကရုဏာပါရမီ၊ မေတ္တာပါရမီတွေကို ဖြည့်ဆည်းအားထုတ်နေတဲ့ ဘုရားအလောင်း မဟာဣတ္ထိယ တစ်ယောက်လို့တောင် ရည်ညွှန်းပြောဆိုနေကြတာ ကြားရတယ်ဗျ။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ “အိုး ကျွန်မကတော့ ဘုရားပဲ တနေမိတော့တာပါပဲ။ ကျွန်မက အဲဒီအဆင့်နဲ့ အလှမ်း ဝေးလွန်းပါတယ်ရှင်။ လူတွေက ကျွန်မကို အဲလိုမျိုးတစ်စုံတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ထင်နေကြတာကို အံ့သြလို့ မဆုံးအောင်ပါပဲ။
ကျွန်မကသာ အဲဒီလိုမြင့်မားတဲ့စွမ်းရည်မျိုးရှိနိုင်ပြီလို့ ထင်မိတဲ့အချိန် တစ်နေ့နေ့မှာတော့ ဗောဓိသတ္တ (ဘုရားလောင်း) တစ်ဆူတော့ ကျွန်မ ဖြစ်ချင်ပါရဲ့ရှင်။ တကယ်တော့ ကျွန်မက မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ လူတွေထဲက လူတစ်ယောက်လို့တော့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗောဓိသတ္တဖြစ်ရေး အဓိဋ္ဌာန်ပြုဖို့ (ဘုရားဆုပန်ဖို့) သင်လျော်တဲ့ လူလို့တော့ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ မတွေးမိ မထင်မိ၊ မပြုလုပ်မိသေးပါဘူး။
ကျွန်မက ကောင်းအောင် လုပ်ဖို့ပဲ အားစိုက်ကြိုးစားဖြစ်ပါတယ်။(ရယ်လျက်) ဒါကလည်း ကျွန်မအမေက ကျွန်မကို ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းပါပဲလေ။ ပြောရရင်တော့ ကောင်းမှုရဲ့ ကောင်းကျိုးကို ကျွန်မအမေက အလေးထားခဲ့တာကိုး။ အချိန်တိုင်း ကောင်းအောင်နေနိုင်တယ်လို့တော့ ကျွန်မမပြောလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက်တော့ ကျွန်မကြိုးစားဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မက စိတ်တိုတတ်တယ်ရှင့်။ ဒါပေမယ့် အခု အရင်လောက်စိတ်မတိုတော့ဘူးလို့ ပြောရမယ်။ ၀ိပဿနာက အများကြီး အထောက်အကူပြုတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ သူတော်ယောင်တစ်ယောက်၊ သီလကြောင်တစ်ယောက်လို့ ထင်မိတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်မစိတ်တိုမိတုန်းဆိုတာ ကျွန်မ၀န်ခံပါတယ်။
မသိနားမလည်တာ၊ ရိုးရိုးသားသားမှားမိတာလေးတွေကို ကျွန်မက နားလည်ပေးနိုင်ပေမယ့် သီလကြောင် သဘောမျိုးကိုတော့ ကျွန်မ နည်းနည်းလေးမှ သည်းမခံနိုင်ဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်မ သတိပဋ္ဌာန် တရားပွားများမှ ဖြစ်မယ်လေ။ ကျွန်မ စိတ်တိုနေပြီဆိုရင် “အော် ငါစိတ်တိုနေပါလား ”လို့ သိနေရမယ်။ ကွန်မကတော့ စိတ်တို နေတဲ့ ကျွန်မကိုယ်ကို ရှုမှတ်လိုက်တာပါပဲ။ ပြီးတော့ “ငါစိတ်တိုနေတယ် ငါစိတ်တိုနေတယ်” လို့ ကျွန်မဘာသာ ကျွန်မ ရွတ်ဆိုဖြစ်တယ်၊ အဲဒီလို ကျွန်မရဲ့ ဒေါသကို ကျွန်မထိန်းချုပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဒေါသကို ဆက်မပွားအောင် ထိန်းချုပ်ပါတယ်။
အလန်ကလီးမင့်ထ်။ ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တော်တော်ကြာက ဘုရားဆုပန်ထားတယ် ဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုကို အင်တာဗျူးခဲ့တယ်ဗျ၊ သူ့ကို ကျွန်တော်က “ တပ်မတော်ကို ထိန်းချုပ် အမိန့်ပေးခွင့်ရှိတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဗောဓိသတ္တအဖြစ် ဘုရားဆုပန်ထားတာ ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လေမလဲ ” လို့ မေးတော့ ဦးနုက (ကျွန်တော်အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင်) “ အဲဒါဟာ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးတစ်ခု၊ အမြဲတမ်း သီလပိုင်းဆိုင်ရာ အကြပ်အတည်းကြီး တစ်ခုလောက်နီးနီးပဲ”လို့ ဖြေခဲ့တယ်ဗျ။ သူပြောတာက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်း တစ်ယောက်အနေနဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို အသုံးပြုဖို့ တာဝန်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက် ဖြစ်နေတာဟာ သဟဇာတမဖြစ်လှဘူးတဲ့ဗျ။ ခင်ဗျားအနေနဲ့ရော အဲဒီလို အကြပ်အတည်းမျိုး ခံစားရပါသလား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ မခံစားရပါဘူး၊ ကျွန်မအနေနဲ့ အကြပ်အတည်းမမြင်ပါဘူး၊ ကျွန်မက ဘုရားဆုပန်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးမှာ ရှိနေတယ်လို့ မထင်ဘူးလေ။ ကျွန်မရဲ့ ပထမရည်သန်ချက်က လောကရေးရာများမှာ ဗုဒ္ဓအရှင်ရဲ့ ဥပဒေသတွေအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ပါပဲ။ တကယ်လည်း ကျွန်မ တရားအားထုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ကျွန်မတို့ လူသားအားလုံးမှာ မျက်ကွယ်ပြုလို့မရတဲ့ ဘာသာရေးအတိုင်းအတာ တစ်ခုတော့ ရှိရမယ်လို့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်က ယုံကြည်နေလို့ပါ။ ပြောရရင်တော့ အသက်အရွယ်ထောက်လာတဲ့ နောက်ပိုင်း အချိန်တွေမှာ ဘာသာရေးထဲမှာ နှစ်ပြီး အားထုတ်ရမယ့် သာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်အဖြစ် ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ စဉ်းစားထားပါတယ်။
အလန်ကလီးမင့်ထ် ။ ။ ခင်ဗျားရဲ့ ဘ၀ကို နောက်ကြောင်း ပြန်လိုက်ရင် ခင်ဗျားရဲ့ ပုဂ္ဂလိကတိုးတက်မှုအပေါ်မှာ ထူးခြားတဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သင်ခန်းစာတွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ ဘ၀မှာ ကျွန်မဘာလေ့လာပြီးပြီလဲဆိုတော့ “အကြီးမားဆုံးဆင်းရဲမှုကို ပေးတာဟာ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ အပြုအမူပဲ” ဆိုတာပါ။ တစ်ခြားလူက လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါကလည်း ကျွန်မကြီးပြင်းလာရတဲ့ ဘ၀အခြေအနေကြောင့် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မအမေက ကျွန်မကို “အမှားလုပ်တာဟာ ဘာကောင်းကျိုးမှ မပေးဘူး ” ဆိုတဲ့ ဥပဒေသကိုပဲ ကျွန်မကို သွန်သင်ပေးခဲ့တာပါ။
ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရဲ့ အတွေ့အကြုံအရလည်း အဲဒီအတိုင်းပဲ အမှန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ “အခြားလူတွေက ရှင့်ကို ဆိုးကျိုးဖြစ်အောင် လုပ်လို့မရဘူး ” ဆိုတဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အမြင်မျိုး ရှင့်မှာ ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့က ရှင့်ကို ခြိမ်းခြောက်လို့လည်း မရဘူးပေါ့။ ရှင့်အနေနဲ့ အခြားလူတွေအပေါ်မှာ မေတ္တာတရား မထားတော့ဘူးဆိုရင် ရှင်လည်း ချမ်းသားမယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူးရှင်။
အလန်ကလီမင့်ထ်။ ။ ခင်ဗျားကိုယ်ခင်ဗျား ဘယ်လိုလူစားမျိုးလို့ သတ်မှတ်မလဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ အင်း တစ်ခါတစ်ရံမှာ တစ်ခြားလူတွေက ကျွန်မကို မြင်တာနဲ့ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မမြင်တာ မတူတတ်ဘူးရှင့်။ ဆိုကြပါစို့ ကျွန်မကို သတ္တိကောင်းလိုက်တာလို့ ပြောကြတဲ့ကိစ္စလေ၊ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ “သတ္တိကောင်းကြီး”လို့ တစ်ခါမှ မတွေးမိပါဘူး (---------) ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်လည်း မမြင်မိပါဘူး၊ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မမြင်မိတာကတော့ ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်အဖြစ်ပါ။ ကျွန်မ ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးပါဘူး။ ကျွန်မက “အရှုံးမပေးဘူး ” လို့ ပြောတဲ့အခါ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အလျှော့မပေးဘူး လို့ ပြောနေတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး၊ အဓိကအခြေခံအားဖြင့် ကျွန်မဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ နေရာမှာ အရှုံးမပေးဘူး လို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလန်ကလီမင့်ထ်။ ။ ဆိုတော့ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်မှု သို့မဟုတ် ပါရမီအဓိဋ္ဌာန်တရားလို့ ပြောရမယ့် ဒီအဇ္ဈတ္တမောင်းနှင်အားကပဲ ခင်ဗျားကို ဘာဆိုတာ သတ်မှတ်ကြမှာပေါ့။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ လူတွေကတော့ ကျွန်မရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများကြီးပြောနေကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်သူကြီးရယ်လို့လည်း မထင်မိပါဘူး၊ ကျွန်မဟာ “ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်”လို့ပဲ ထင်ပါတယ်ရှင်။
အလန်ကလီးမင့်ထ်။ ။ ဗုဒ္ဓ၀ိပဿနာတရားက ခင်ဗျားအပေါ်မှာ ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိသလဲဗျ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ စိတ်ပျိုးထောင်မှုပုံစံတစ်မျိုးပါပဲ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရေးနဲ့ ဖြူစင်ရေးလမ်စဉ်တစ်ခုပါ။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ သတိလေ့ကျင့်မှုပါပဲ။ ရှင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ သတိရှိရှိ သိနေရင် ရှင့်အနေနဲ့ မစင်ကြယ်တာတွေကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်တာပေါ့။
အလန်ကလီမင့်ထ်။ ။ နေ့စဉ် ကျင့်ဝတ်တစ်ခုအဖြစ် တရားထိုင်ဖြစ်အောင် ဘယ်အရာက ခင်ဗျားကို တွန်းအားပေးသလဲဗျ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ ကျွန်မ တရားထိုင်ဖြစ်တဲ့ အဓိက အကြောင်းကတော “ကျွန်မလုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်တာကို ( မမြဲမှု အနိစ္စသဘောကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ နားလည်ဖို့ သတိပဋ္ဌာန်ပွားများမှုလိုမျိုး ) လုပ်နေတယ် ” လို့ သိတဲ့ အသိက ရလာတဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုလေးပါပဲ။ ကျွန်မမှာ ဘ၀နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ စိတ်သဘောထားတွေပဲ ရှိပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ တရားမျှတမှု သို့မဟုတ် မေတ္တာတရားဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ကျွန်မ လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်တဲ့ တစ်စုံတစ်ရာရှိရင် အဲဒါကို ကျွန်မလုပ်မှာပါ။
အလန်ကလီမင့်ထ်။ ။ ခင်ဗျားရဲ့ အဇ္ဈတ္တအတွင်းသားအသစ်တွေကို ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ ၀ိပဿနာက ဘယ်လို အထောက်အကူပြုသလဲ။ ၀ိပဿနာဆိုတာ မိမိကိုယ်ကိုယ် ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်မျိုးလား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ ၀ိပဿနာဆိုတာ မိမိကိုယ်ကိုယ်ရှာဖွေခြင်းလား စိတ်သန်စွမ်းရေးလား ဆိုတာ ကျွန်မမသိပါဘူး။ ကျွန်မကို သင်ကြားပေးတာကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရိုးသားဖို့ပါပဲ။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကျွန်မမှာ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့ အလေ့အကျင့် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်မမှာ ကျွန်မကိုယ်တိုင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသစ်တွေ့ရှိချက် တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ၀ိပဿနာကတော့ မှန်ကန်တဲ့(သမ္မာမဂ္ဂင်)လမ်းကို လိုက်ဖို့ လောကုတ္တရာခွန်အားကို ပေးပါတယ်။
ပြီးတော့ ကျွန်မအတွက် ၀ိပဿနာဆိုတာ ဘ၀နေနည်းတစ်ခုပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ ၀ိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာက သတိတရားကို ပွားများပြီး စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ သင်ယူနေရတာမို့ပါ။ ဒီသတိတရားက နေ့စဉ်ဘ၀ထဲမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်နေမှာပါ။ ကျွန်မအတွက်တော့ ဒါဟာ ၀ိပဿနာတရားရဲ့ လက်တွေ့အကျဆုံး အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်မရဲ့ သတိအာရုံတွေ မြင့်မားလာတယ်လေ။ ခုဆို ကျွန်မဟာ အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ မေ့မေ့လျော့လျော့ ပေါ့ပေါ့ဆဆ လုပ်မိ ကိုင်မိတာတွေ နည်းလာပါတယ်။
အလန်ကလီမင့်ထ်။ ။ ၀ိပဿနာကို ခင်ဗျား ဘယ်လိုသင်ယူလေ့လာခဲ့ပါသလဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ ကျွန်မ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာကို သွားခဲ့တယ်ရှင့်။ ဒါပေမယ့် ဒါကလည်း ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မ အသက်နှစ်ဆယ်ကျော် အရွယ် မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာတဲ့ တစ်ခေါက်ကပါ။ ပြောရရင်တော့ ထိထိရောက်ရောက် တရားမထိုင်ဖြစ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်း ၀ိပဿနာကို အားစိုက်ပွားများဖြစ်တာကတော့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကာလနှစ်တွေမှာပါ။ စာအုပ်တွေကို အမှီပြုပြီး အားထုတ်ခဲ့ရပါတယ်၊ ဆရာတော် ဦးပဏ္ဍိတရဲ့ “ ဒီဘ၀ဒီခန္ဓာမှာ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်က အများကြီး အထောက်အကူပေးခဲ့ပါတယ်။
အလန်ကလီမင့်ထ်။ ။ “အခါအားလျော်စွာ ခင်ဗျားဟာ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ဆရာတော်ဦးပဏ္ဍိတရဲ့ ကျောင်းကိုသွားပြီး ဆရာတော့်ကို ဂါရ၀ပြုလေ့ရှိတယ် လို့ သိရပါတယ်။ ခင်ဗျားအတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ ဆရာတော်ရဲ့ တရားအချို့ကို မျှဝေပေးပါလား။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ “ဆရာတော်က ကျွန်မကို ဟောကြားခဲ့သမျှ မှတ်မိနေတယ်ရှင့်။ အရေးကြီးဆုံးဒေသနာတစ်ခုကတော့ သတိတရားကို အပိုလုပ်မရဘူးဆိုတာပဲ။ ဆရာတော် မိန့်တာက “ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ပညာတွေ ၀ီရိယတွေ အများကြီး ရှိလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သတိကိုတော့ အပို လုပ်မရဘူး”တဲ့။ အင်း ကျွန်မလည်း ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ (၇)နှစ်အတွင်း (ရယ်လျက်) တကယ့်ကို သတိတရား ပွားများဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာတော်က ကျွန်မကို စကားပြောတဲ့အခါ စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဦးတည်မယ့် စကားကိုပဲ စူးစိုက်ပြောဆိုဖို့ အကြံပြုခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျွန်မပြောသင့်တဲ့ စကားဟာ နားထောင်သူအတွက် အမှန်လည်း ဖြစ်မယ်။ အကျိုးလည်း ရှိမယ်။ နားဝင်လည်း ချိုရမယ်ပေါ့လေ။ ဆရာတော်က ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ စကားနှစ်ခွန်းရှိပါတယ် တဲ့။ မှန်လည်းမှန်၊ အကျိုးလည်းရှိ ၊လက်ခံဖွယ်လည်း ဖြစ်တဲ့ စကားနဲ့ မှန်လည်း မှန်၊ အကျိုးလည်း ရှိ သို့သော် လက်ခံနိုင်ဖွယ် မရှိတဲ့ နားဝင်မချိုတဲ့ စကားတွေပေါ့ရှင်။
အလန်ကလီမင့်ထ်။ ။ “ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အခြားသော ဂိုဏ်းဂဏ ဘာသာတရားတွေဆီကနေ သင်ယူ လေ့လာဖို့ စိတ်ကို ဖွင့်ထားတာမျိုး။ မျှမျှတတ ဖြစ်အောင် ဆောက်တည် ထားတာမျိုး ရှိပါသလား။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ “ကျွန်မက ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်ဆိုပေမယ့် မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ၀ဇိရယာန ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုလည်း လေးစားပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မက အခြားသော ဘာသာတရားများကိုလည်း နှစ်နှစ်ကာကာ လေးစားပါတယ်။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်က အခြားလူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘာသာတရားကို အထင်အမြင်သေးခွင့်ရှိတယ်လို့ မမြင်မိပါဘူး။ ကျွန်မက တစ်ခြားလူတွေရဲ့ ဘာသာရေးအတွေ့အကြုံနဲ့ အမြင်တွေကို နားထောင်ဖို့ အလွန်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ကျွန်မကို သင်ကြားပေးဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေများစွာဆီက ကျွန်မ အများကြီး သင်ယူရပါဦးမယ်။”
အလန်ကလီမင့်ထ်။ ။ “ ခင်ဗျားလေးစားတဲ့ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အသွင်လက္ခဏာတွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲဗျ”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ “ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ထေရ၀ါဒထက် ပိုပြီး ကရုဏာတရား အကြောင်းပြောကြတယ်။ ကျွန်မအဲဒါလေးကို သဘောကျတယ်။ ကျွန်မတို့ ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာ ကရုဏာတရား အများကြီး လိုနေတာဆိုတော့လေ။ တကယ်တော့ ကရုဏာတရားဆိုတာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ သွန်သင်ချက် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်မက ကရုဏာတရားတွေ တကယ်လက်တွေ့ အကောင်အထည် ပေါ်လာအောင် ကျွန်မတို့ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေ ဆောင်ရွက်ကြတာကို ပိုပြီး မြင်ချင်တာပါပဲရှင်။
မူရင်း ပိုစ့်ပိုင်ရှင် ။ ။ ဓမ္မင်္ဂါ
Posted by အရှင်နာယကာလင်္ကာရ
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:16 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နှလုံးသားနဲ့ခံစားမှုကို တူးဆွမယ့်ရုပ်ရှင်
မစပ်စု| July 28, 2012
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီး တို့ကို ရိုက်ကူးရေး စတင်သော လွန်ခဲ့သည့် စနေနေ့က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – မျိုးမြင့်ဆွေ)
ရုပ်ရှင် အနုပညာလောကထဲကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက ၀င်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို အခြေခံတဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်(Documentary)ကို စတင်ရိုက်ကူးနေပါပြီ။ ဒီမှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးနဲ့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း ထားပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဟောင်ဆောင်ရှိ ကယန်းလူမျိုးများအကြောင်း မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၊ အင်းလေး ဒေ သ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် “အင်းသီး” ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တို့အပြင် အခြားသော Documentary အမြောက်အမြားကို ရိုက်ကူးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ အလုပ်သမားတွေရဲ့ ဘ၀ ဇာတ်ကြောင်းတွေကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းမှာလည်း ဗီဒီယို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား များစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ Documentary ကို ဘယ်လို ရိုက်ဖြစ်သွားတာလဲ။
ဖြေ။ ။ အမေစုက ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၁၃ မှာ အကျယ်ချုပ်ကနေ လွတ်မြောက်လာတယ်ပေ့ါ။ ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာလ ထဲမှာ အမေစုနဲ့ သွားတွေ့ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီ တွေ့တုန်းမှာပဲ ကျနော် ရိုက်ထားတဲ့ အင်းသီး ကိုလည်း လက်ဆောင်ပေးရင်းနဲ့ အမေစုရဲ့ Biography (အတ္ထုပ္ပတ္တိ) ကို အခြေခံတဲ့ Documentary ရိုက်ချင်ပါတယ်လို့ ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီတုန်းက အမေစုက ရိုက်တာတော့ ရိုက်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခဏတော့နေပါဦးပေ့ါ ဆိုပြီးတော့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ နောက် တော့ ၂၀၁၁ ဇူလိုင်လထဲမှာ ကိုလံဘီယာမှာ လုပ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ကဗျာပွဲတော်ကို သွားတက်ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကျနော်က အမေစု ကို ကဗျာပွဲတော်က ဖိတ်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကဗျာရွတ်မှာပါ၊ အမေစုရဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ်လောက် ချီးမြှင့်စေချင်ပါတယ်လို့ ဆိုတော့ အမေစုက ကဗျာလေးတပုဒ် ပေးခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ ကဗျာလေးကိုလည်း ယူသွားပြီးတော့ ကျနော့် ကဗျာတွေနဲ့အတူတူ ရွတ် ခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီကပြန်လာတော့ ကဗျာပွဲတော်က အတွေ့အကြုံ လေးတွေပြောပြဖို့ အမေစုနဲ့ထပ်တွေ့ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဒီ Documentary ရိုက်ဖို့ ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်။ အမေစုကကျနော့်ကို ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက၂၀၁၁ ဇူလိုင်ပေ့ါ၊ အခု၂၀၁၂ ဇူလိုင်မှာ ကျနော်တို့ ရိုက် ကူးရေးစတယ်။
ဒီ တနှစ်အတောအတွင်းမှာ Pre production ပေ့ါလေ။ အဲ့ဒါက အမေစုရဲ့ Biographyနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေ ရှာဖွေဖတ်ရှုရတာ တို့၊ Research သုတေသန လုပ်တာတို့ ပေ့ါလေ။ နောက် ရိုက်ကူးရေးအတွက် လိုအပ်မယ့် ပစ္စည်းကိရိယာတွေ စုဆောင်း ရတာတို့ ပြင်ဆင် ရပါတယ်။ အဲ့ဒီတနှစ်တာမှာလည်း သူ့ရဲ့ မွေးတာကနေ အခုလက်ရှိ ရှိတဲ့အချိန်အထိ ပေ့ါ၊ Time line တခု ဆွဲရတယ်။ အဲ့ဒါကို အမေစုနဲ့တွေ့ပြီးတော့ ဒါတွေကို ဘယ်လိုပိုင်းခြားထားတယ်၊ ဘယ်လို လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ တချို့ဟာ လေးတွေ ထပ်ပြီး ဆွေးနွေးရပါ သေးတယ်။
အဲ့ဒီတော့ အမေစုက သမိုင်းတချို့အချက်အလက်တွေ တိကျဖို့အတွက် ဘဘ ဦးတင်ဦးတို့၊ ဘဘ ဦးဝင်းတင်၊ ဦးဝင်းထိန်တို့ကို အင်တာဗျူးဖို့ လိုအပ်တဲ့အတွက် ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ၂ ခါ ၃ ခါလောက်တွေ့ပြီး အင်တာဗျုးလေးတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ ဇူလိုင် ၂၁ ရက်နေ့က စပြီးတော့ ရိုက်ကူးရေးကာလကို ရောက်သွားပြီပေ့ါ။
မေး။ ။ ဒီ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို ဘယ်ကာလလောက်အထိ ရိုက်ဖို့ မှန်းထားပါလဲ..။ နာမည်ကရော ဘယ်လို ပေးထားပါသလဲ…။
ဖြေ။ ။ အဲ့ဒါကို စရိုက်တဲ့နေ့ကတည်းက အမေစုနဲ့ နည်းနည်း တိုင်ပင်ရတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ အမေစုက အချိန်က အရမ်းရှားပါးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီ Documentary က ရိုက်မယ်ဆိုရင် အချိန်တော်တော်လေး လုံလုံလောက်လောက်ရမှ တကယ့်ကို ပြည့်စုံပြီး ကောင်းမွန်တာလေးဖြစ်မှာကိုး။ ဒါကြောင့် အမေစု ဒီ Documentary အတွက် အချိန်ဘယ်လောက်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာ ကို ကျနော်တို့ ညှိနှိုင်းကြပါတယ်။ ကျနော်ရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံရဖို့ဆိုရင် တနှစ်ခွဲအတွင်းမှာ ဖြည်းဖြည်းချင်း အချိန် ပေးသွားမယ်လို့ သဘောတူညီမှုရပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ Production ကာလက တနှစ်ခွဲလောက် ကြာပါလိမ့်မယ်။ တည်းဖြတ်တာတို့ Music ထည့်တာ Master ထုတ်တာတို့က နောက်ထပ် ခြောက်လပေါ့လေ၊ အဲ့ဒီတော့ ဒါကနောက်ထပ် ၂ နှစ်လောက်တော့ အချိ်န် ယူပါလိ့မ်မယ်။ နာမည်လည်း မစဉ်းစားရ သေးပါဘူး။
မေး။ ။ ကိုမင်းထင်ကိုကိုကြီး ရိုက်ခဲ့တဲ့ Documentary တွေထဲမှာ လူတယောက်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးတာ ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ Documentary က ပထမဆုံး လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ရွေးချယ်ဖြစ် တာ ပါလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာက သိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ် သုံးယောက် ရှိတာပေ့ါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဦးသန့်၊ ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည် ပေါ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Human Right(လူ့အခွင့်အရေး)နဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်း ရေး အတွက် ကမ္ဘာမှာ သူက Icon (စံပြ)တခု ဖြစ်နေပြီလေ။
ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အင်မတန်ကို လေးစား ချစ်ခင်မြတ်နိုးရသူပေ့ါ။ အဲ့ဒီလို လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အခု ဟာက သူလည်း သက်ရှိထင်ရှား ကိုယ်လည်း သက်ရှိထင်ရှား ကြုံရတာပေ့ါ။ အဲ့ဒီတော့သူက နိုင်ငံအတွက် သူတတ်နိုင်သလောက် လုပ်တယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှ အဲ့ဒီလောက်ထိ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်မှာရှိတာတော့ အနုပညာလေး ရှိတာပေ့ါလေ။ အဲ့ဒီ အနုပညာလေးနဲ့ ကျနော်တို့ သက်ရှိထင်ရှားကြုံနေတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင် ကျနော်တို့ ချစ်မြတ်နိုး တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကို ကျနော့်မှာရှိတဲ့ အနုပညာလေးနဲ့ ဘာလုပ်ရင်ရမလဲဆိုတာ ဒီတခုတည်း တွေ့တာကိုး။ ဒါကြောင့် ဒီ Documentary ရိုက်ဖို့ ဖြစ်လာတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
မေး။ ။ ဒီ Documentary ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဖြတ်သန်းမှု ဘ၀တလျှောက်လုံးက ဘယ်အပိုင်းကို အဓိကထား ရိုက် ကူးဖြစ်မလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းကို Documentary ရိုက်မယ်ဆိုရင် အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားသားတွေ ချဉ်းကပ်မယ့် Point of view (ရှုထောင့်) တခု ရှိလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံရေးမှာ ဘယ်လို လုပ်ခဲ့ တယ်၊ ဘယ်လို အောင်မြင်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်လို စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံခဲ့တယ်၊ ဆိုတာတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျနော့်ရဲ့ Documentary မှာတော့ အဲ့ဒါတွေထက် သူ့ရဲ့နှလုံးသား၊ သူရဲ့ခံစားမှုတွေကို တတ်နိုင်သလောက် တူးဆွကြည့်ပြီးတော့ ဖန်တီးဖြစ်လိမ့်မယ်။
မေး။ ။ ရုပ်ရှင်တွေ ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွေ ရိုက်ကူးရတာနဲ့ အခုလို Documentary ရိုက်ရတာ ဘယ်လို ကွာခြား ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ Feature Film က ပြောမယ်ဆိုရင် စိတ်ကူးကို အခြေခံတယ်ပေ့ါ။ စိတ်ကူးတခုကို အခြေခံပြီးရေးလိုက်တဲ့ စိတ်ကူးကဲတဲ့ ဇာတ်လမ်း ပေ့ါလေ။
ဥပမာ- The lady ဆိုတာလည်း အတ္ထုပ္ပတ္တိကို အခြေခံတဲ့ ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင် တခုပေါ့။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကူးကဲတာပေါ့လေ။ အဲ့ဒီတော့ စိတ်ကူးကိုအခြေခံတဲ့ ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်ရတာက ဥပမာ- ကျနော့်မှာ စိတ်ကူး တခုရှိမယ်။ စိတ်ကူးထဲမှာ ဇာတ်လမ်းလေး တခုရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် တကယ့် အတ္ထုပ္ပတ္တိကို အခြေခံမှာဆိုလည်း အဲ့ဒါနဲ့ ပတ်သက်တာလေး ရမယ်။ အဲ့ဒါကိုမှ စိတ်ကူးလေးနဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေကို ဇာတ်ညွှန်း ချရေးလိုက်မယ်။ စိတ်ကူးထဲက ဇာတ်လမ်းပေ့ါ။ အဲ့ဒီတော့ အနုပညာကို ဖန်တီးတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖန်တီးတဲ့သူဆီမှာလည်း လိုင်စင်တခု လက်ထဲမှာရှိနေတယ် ပေ့ါလေ။
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်နှစ်သက်သလို ဖန်တီးလို့ရတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီဇာတ်ညွှန်းအတိုင်း ရိုက်မယ်။ ကားဆက်တော့လည်း လက်ထဲမှာရှိထားတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းအတိုင်းပဲ ဆက်တာ။ ဘာမှ အခက်အခဲမရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် Documentary မှာကျတော့ အဲ့ဒီလို လွယ်လွယ်ကူကူ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဇာတ်ညွှန်းလည်း လက်ထဲမှာမရှိဘူး။ ဘာပဲ ရှိမလဲဆိုတော့ Treatment တခု၊ Idea တခုပဲ ရှိလိမ့်မယ်။ Develop လုပ်ထားတဲ့ Treatment အကြမ်း တခုပဲ ရှိလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ ကျနော်တို့က ရိုက်ရတာကိုး။ အဲ့ဒါကျတော့ အခြေအနေတွေအချိန်အခါတွေ ပြောင်းလဲနေမယ်။ အဲ့ဒီအပေါ် မူတည်ပြီးတော့ နဂိုအကြမ်းချထားတဲ့ Treatment ကလည်း ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးလည်း ရှိတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Documentary ကောင်းတခု ဖန် တီး ရတာ အရမ်း မလွယ်ကူပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေတော့ ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။
မေး။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ Documentary ကို ရိုက်ကူးပြီးစီးသွားလို့ ထွက်လာပြီဆိုရင် ဘာဆက်လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါလဲ။
ဖြေ။ ။ ရိုက်ကူးရေးပိုင်းနဲ့ ကားဆက်တဲ့အထိက နောက်ထပ် နှစ်နှစ်လောက် ကြာမှာလေ။ နောက်တော့မှ Screening ဆိုတဲ့ ပြသ တာပေ့ါလေ။ နောက်တော့ ဖြန့်ဝေတာပေ့ါ။ ဒါတွေက နောက်ထပ် ၂ နှစ်လောက်နေမှ ကျနော်တို့ အဲ့ဒါကို လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အခုချိန်မှာ ဒါကို ကြိုတင်ပြီးတော့ ဘာမှ ပြောမထားချင်ပါဘူး။
မေး။ ။ မြန်မာပြည်က ဒါရိုက်တာ တယောက်အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ Documentary ကို ရိုက်ကူး မှတ်တမ်းတင်တာ ကိုမင်းထင်ကိုကိုကြီး က ပထမဆုံးဆိုတော့ ကိုမင်ထင်းကိုကိုကြီးရဲ့ သဘောထားကို သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ဒီအလုပ်က တော်တော် တာဝန်ကြီးပါတယ်။ ဒီ Documentary ပြီးသွားရင် မြန်မာနိုင်ငံကလည်း ကြည့် လိမ့်မယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ Documentary ဖြစ်နေတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာကလည်း ကြည့် ကောင်း ကြည့်ကြ လိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Documentary ဘာလဲဆိုတာ သိတဲ့သူ ရှိလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနေအထားအရ Documentary ဘာလဲဆိုတာ သိတဲ့သူက တော်တော်နည်းတာကိုး။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတကာမှာတော့ Documentary ဆိုတာကို သိတဲ့သူတွေ၊ အတတ်ပညာရှင်တွေက များတယ်။ အဲဒီလူတွေရဲ့မျက်စိ ထဲမှာ ကျနော်က သင့်တင့်လျောက်ပတ်မှုရှိတဲ့ Documentary လေးတခု Minimum Level လေး တခုပေါ့၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့် အတန်းနဲ့ ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီ အဆင့်လောက်လေးပေ့ါ၊ ဒါဟာ အောင်မြင်ခြင်း၊ မအောင်မြင်ခြင်း မဟုတ်သေးဘူး။ ဒီအဆင့် လေးတခု ရဖို့အတွက်တောင် တော်တော်လုပ်ရမှာ။ ဒါလေးကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးပဲ ရှိပါတယ်။ ကျန် တာတွေ ဘာမှ မရှိပါဘူး။
မေး။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်(Documentary) နဲ့ပတ်သက်လို့ ရိုက်ကူးခွင့်၊ ပြသခွင့်၊ တရားဝင် ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိဘူးလို့ ကိုမင်းထင်ကိုကိုကြီး ပြောဖူးခဲ့သလိုပဲ။ ဒီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ Documentary နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာတွေဘက် ကရော ဘယ်လိုသဘောထား ရှိလာမလဲလို့ မြင်မိပါလဲ။
ဖြေ။ ။ မှန်တာပြောရရင် အဲ့ဒါတွေ ခေါင်းထဲမှာ ရှိကို မရှိဘူး။ သူတို့ ခွင့်ပြုချက် မပေးတာတို့၊ သူတို့က ဘယ်လိုတို့ ဘာတို့ ညာတို့က ခေါင်းထဲမှာ မရှိဘူး။ ဒါကို စဉ်စားစရာ လိုတယ်လို့လည်း ကျနော် မထင်ပါဘူး။ ။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:31 PM No comments:
“အယ်လ်ကိုင်းဒါး နဲ့ အစ္စလာမ် စစ်သွေးကြွတွေကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ အမေရိကန်တွေဟာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လွန်းတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်” အဲဒါ ဟုတ်ပါသလား..။
“နေစမ်းပါအုံး။ ဂျီနီဗာ သဘောတူညီမှုဆိုတာ နိုင်ငံရှိတဲ့ သူတွေက ရေးဆွဲထားတဲ့အချက်အလက်တွေပါ။ နိုင်ငံမရှိတဲ့ အယ်ကိုင်းဒါး အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု့အန္တရာယ်တွေကို တားဆီးဖို့အတွက် ကျနော့နိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးဟာ အဓိက အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ သူတို့ကို လူ့အခွင့်ရေးပေးစရာ လိုလို့လား”
ဒီမိုကရေစီ ဘိုးအေနိုင်ငံများသည်ပင် နိုင်ငံတော်လုံခြုရေးနှင့် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ဦးစားပေးစဉ်းစားလေ့ရှိသည်..။
တာလီဘန်မှ ခွဲထွက်လာသော အစ္စလာမ်အစွန်းရောက် အယ်ကိုင်းဒါးခေါင်းဆောင် အိုစမာဘင်လာဒင်ကို သုတ်သင်ရာတွင် လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးထားသည်ဟု နာမည်ကြီးသူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မျိုးရိုးမှလာသော အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘာမားသည် ပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်တို့ကို အသိမပေးပဲ ပါကစ္စတန်ပိုင်နက်တွင်း NAVY SEAL အထူးတပ်ဖွဲ့ကို လွှတ်ပြီး ၀င်သုတ်သင်စေသနည်း.....။
၄င်း၏ မဟာမိတ်ဟုပြောလို့ရသော ပါကစ္စတန်တပ်များမှ ကျုးကျော်သူခေါင်းစဉ်တပ်ကာ ဘင်လာဒင်ဘက်မှ အမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့ကို ၀င်တိုက်လျှင် ပါကစ္စတန်ကို ဗုံးကြဲပစ်ရန် ဗုံးကြဲလေယာဉ်များ ဘာ့ကြောင့် အဆင်သင့်ပြင်ထားသနည်း..။
ထိုစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်နေသော အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့် ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု အမိန့်ပေးကွပ်ကဲခဲ့သနည်း..။
ဘင်လာဒင်သည် မိမိနိုင်ငံလုံခြုံရေးနှင့် မိမိနိုင်ငံမှ ပြည်သူလူထု၏ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို နာလံမထူအောင် ဖန်တီးခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် ထို့ပြင် ..မသေမချင်း ခြိမ်းခြောက်နေဦးမည်ဖြစ်သည့်အတွက် သမ္မတနှစ်ဆက်ပြောင်းသည်အထိ ....ဆယ်နှစ်တိုင်တိုင် လုံးဝလက်မလျှော့ပဲ လိုက်လံရှာဖွေကာ.....နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် အင်အားသုံး လက်စတုံးသုတ်သင်ခြင်းဖြစ်သည်..။ ထိုသုတ်သင်သူအား အကာအကွယ်ပေးသူသည် သူ့ရန်သူဖြစ်သည်...။
ကျွန်တော်တို့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်လည်း ထို့အတူပင်..။
သူပြောခဲ့သောစကားတစ်ခွန်းအတွက် တစ်ဖက်က အကျိုးဆက်များဖြစ်လာမည်ကို သိရှိသော်လည်း ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် သူ့စကား သူတာဝန်ယူကာ နိုင်ငံတကာအစ္စလာမ်အသိုင်းအ၀ိုင်း၏ အမုန်းခံကာ ဘင်္ဂလီကို လက်မခံဟု ကမ္ဘာသိ ပြောကြားခဲ့ခြင်းကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လေးစားထောက်ခံပါသည်..။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:05 PM No comments:
ဗိုလ်သန်းရွှေ စစ်အုပ်စုစိတ်ကြိုက် ရေးဆွဲအတည်ပြုထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံအောက်မှာ ကမ္ဘာကျော်အတိုက်အခံပါတီNLD ကို တုတ်တုတ်မှ မလှုပ်နိုင်အောင် ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစား
ခွက်ခွက်လန်အောင် အရှုံးကိုခုသာခံသာဖြစ်စေမယ့် ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲစနစ် Majority System ကို ProportionalRepresentation System (PR စနစ်)နဲ့ အစားထိုးဖို့လှုံ့ ဆော်သွေးထိုးလာရပါတော့တယ်။ ဒီနေရာမှာ အာဏာရပါတီဘက်က ဒီစနစ်ကို ကျင့်သုံးဖို့ တင်ပြလာမှုမျိုး လူထုအမြင်မှာအထင်မခံရလေအောင်အခြားဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားပါတီတွေရဲ့အကြံပြုချက်ပုံစံမျိုးပေါက်အောင် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဦးတင်အေးဦးဆောင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို တင်ပြ။ အခြေခံဥပဒေခုံရုံးရဲ့စိစစ်မှုကို ခံယူ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ဥပဒေကြောင်းအရ အဆုံးအဖြတ် နာယူပြီး ကော်မရှင်မှလိုအပ်သလို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကြိတ်ပုန်းခုတ်နေကြပါပြီ။
proportional representation ခေါ်တဲ့ အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုစနစ် ကျင့်သုံးရေးသတင်း ကို http://www.bbc.co.uk/burmese/burma/2012/07/120724_uthuwei.shtml
၂၀၁၀ ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာ အာဏာရှင်ဗိုလ်သန်းရွှေ စစ်အုပ်စုစိတ်ကြိုက် ရေးဆွဲအတည်ပြုထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံအောက်မှာ စနစ်တကျပြင်ဆင်၊ ရေပက်မ၀င်အောင် အခုအခံ လက်နက်မျိုးစုံ ထုတ်သုံးပြီးပိုင်ပြီဆိုမှ ထကြဲ လေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းပါးတဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပေမယ့်နောက်ဆုံးအချိန်အထိ မတရားတဲ့ အောက်လမ်းနည်း ရှိရှိသမျှကိုစစ်အာဏာပိုင်တွေ ကျောထောက်နောက်ခံပြုလို့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအရှက်မဲ့မဲ့ အနိုင်ကျင့်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။
အထက်လွှတ်တော်၊အောက်လွှတ်တော်ထဲမှာအလိုအလျောက်စစ်အမတ်တစ်မတ်သားမျက်နှာပြောင်တိုက်ဝင်ထိုင်ခွင့်ရနေရုံအပြင် စစ်တပ်ပါတီကြံ့ဖွံ့ အနေနဲ့ လည်း လွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံးမှာ နေရာအများစု အုပ်စီးထားနိုင်တဲ့ရလဒ် ထွက်ကိုထွက်မှဖြစ်မယ်၊ အခြား ဘာအဖြေမှ ပေါ်မလာစေရ ဆိုတဲ့ပေါ်လစီကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ နောင် (၅) လုံးလုံးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို စစ်ဒဿန အခြေပြုအမတ်တွေချည်းမောင်ပိုင်စီး သိမ်းပိုက်ချုပ်ကိုင်လို့ခေတ်အဆက်ဆက်က အာဏာရှင်တွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ခုခံကာကွယ်နိုင်မယ့် ဥပဒေတွေကို လိုအပ်သလို ရေးဆွဲ၊ပယ်ချခြင်းတွေကို စိမ်ပြေနပြေ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အုပ်စုအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့NLDပါတီကိုအလိုမရှိသေးတဲ့အချိန်၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲမှာဖယ်ကျဉ်ထားနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့အရပ်သားအရေခြုံစစ်တစ်ပိုင်းအစိုးရဟာသူတို့ အပေါ်နိုင်ငံတကာနဲ့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ အစည်းတွေ၊ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုကို အရေးတကြီး လိုအပ်လာတဲ့အတွက် ဒေါ်စုနဲ့ သူ့ ပါတီကို
နေပြည်တော်နိုင်ငံရေးထဲ မဖြစ်မနေ ဆွဲသွင်းခေါ်ယူဖို့နည်းဗျူဟာမြောက်လက်ကမ်းလာရပါတော့တယ်။
တစောင်းနဲ့ မျက်ချေးဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ နောက်ခံပြု ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ကြအပြီး ပြည်သူတွေ ဘာမှန်းမသိကြရတဲ့ “ယုံကြည်ပါတယ်၊ တူတာတွဲလုပ်ကြပါစို့ ” ဆိုတဲ့
လေတစ်လုံးမိုးတစ်လုံးသံတွေ ဆူညံကာ ဒေါ်စု ကိုယ်တိုင်လည်းကော့မှူးအမတ်အဖြစ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ရဲ့ထိုင်ခုံတစ်လုံးပေါ် ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရာနှုန်းပြည့်နီးပါဒေါ်စုပါတီ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အပေါ် စစ်တစ်ပိုင်းအစိုးရဘက်ကခေါင်းနပန်းကြီး အောင့်သီးအောင့်သက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါ လာမယ့် ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စီမံကိန်းချ အကြံဥာဏ်ထုတ်ရပါတော့တယ်။
လူထုစိန်ဝင်း ဝေဖန်သလို NLD ဟာ အာဏာရနဲ့မောင်နှမပါတီတွေအဖြစ်သမုတ်ခံရပေမယ့် မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လူကိုခင်မှ မူကိုမင်နိုင်မယ် ဆိုတဲ့အလေ့အထ အစွဲအလမ်းကို သဘောပေါက်မိတဲ့ ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရဟာ လာမယ့်
ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်း ဒေါ်စုကို ဘယ်လိုမှ လူလိုသူလို ရင်ဘောင်တန်းယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမရှိမှန်း ဆ၀ါးမိတဲ့အခါ ခွက်ခွက်လန်အောင် အရှုံးကိုခုသာခံသာဖြစ်စေမယ့် ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ
ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲစနစ် Majority System ကို ProportionalRepresentation System (PR စနစ်)နဲ့ အစားထိုးဖို့လှုံ့ ဆော်သွေးထိုးလာရပါတော့တယ်။
ဒီနေရာမှာ အာဏာရပါတီဘက်က ဒီစနစ်ကို ကျင့်သုံးဖို့ တင်ပြလာမှုမျိုး လူထုအမြင်မှာ အထင်မခံရလေအောင် အခြား ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားပါတီတွေရဲ့အကြံပြုချက်ပုံစံမျိုးပေါက်အောင် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဦးတင်အေး ဦးဆောင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို တင်ပြ။ အခြေခံဥပဒေခုံရုံးရဲ့စိစစ်မှုကို ခံယူ၊ ပြည်ထောင်စု
လွှတ်တော်သို့ဥပဒေကြောင်းအရ အဆုံးအဖြတ် နာယူပြီး ကော်မရှင်မှလိုအပ်သလို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကြိတ်ပုန်းခုတ်နေကြပါပြီ။
ဒါဟာဒေါ်စုနဲ့NLD ဘက်က အစိုးရနဲ့ ဘယ်လိုဘဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စမ်းပါစေနောက်ဆုံး အညံ့ခံတဲ့အထိ ဖြစ်လာပါစေဦး၊ ကြံ့ဖွံ့ ပါတီဘက်က အာသာပြေကျေနပ်တင်းတိမ်နေမှာ မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာကျော်အတိုက်အခံပါတီကြီးဖြစ်တဲ့
NLD ကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးရှေ့ ခရီးမှာ ၂၀၀၈ ဥပဒေတွင်း ရှိနေသမျှတုတ်တုတ်မှ မလှုပ်နိုင်အောင် ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။
(PR စနစ်နှင့် အခြား ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များအကြောင်း လေ့လာကြပါရန်)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 8:32 PM No comments:
AAPP မှ ထုတ်ဝေခဲ့သော မင်းကိုနိုင် ၏ နောက်ကြည့်မှန် စာအုပ်
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 8:23 PM No comments:
လန်ဒန်မြို့၂ဝ၁၂ အိုလံပစ် အားကစား ပွဲတော်ကို ဗြိတိသျှ ဘုရင်မကြီး အဲလစ်ဇဘတ် Queen Elizabeth ကိုယ်တိုင် တရားဝင် ဖွင့်လှစ် ပေးလိုက်ပါပြီ။
ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများအားကစားအခု ကျင်းပမယ့် အိုလံပစ် ပွဲတော်မှာ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ နိုင်ငံအသင်းတိုင်းမှာ အမျိုးသမီး အားကစား သမားတွေ ထည့်သွင်း ပါဝင်လာတာ ဒါဟာ ပထမဆုံး အကြိမ်ဘဲလို့ နိုင်ငံတကာ အိုလံပစ် ကော်မတီ ဥက္ကဌ Jacques Rogge က မှတ်ချက်ချပါတယ်။နိုင်ငံ အသီးသီးက ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် ကြမယ့် အားကစား သမားတွေ အားလုံး ကွင်းထဲမှာ တန်းစီ ချီတက်ကြရာမှာ မြန်မာအသင်း အားကစား သမားတွေလည်း အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲရဲ့ အခင်းအကျင်း ပြင်ဆင်မှုတွေကိုတော့ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ ဒန်နီ ဘွိုင်းက တာဝန်ယူ ဖန်တီးတာ ဖြစ်ပါတယ်။အားကစားကွင်း အလယ်မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ ရှေးခေတ် ကျေးလက် ပုံသဏ္ဍန်ကို ဖန်တီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် အားကစား ကွင်းလယ်မှာ မြေအောက်ကနေ မီးခိုခေါင်းတိုင်ကြီးတွေ ထွက်လာပါတယ်။ မီးခိုးခေါင်းတိုင်ကြီးတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဝါးဆယ်ပြန်လောက် မြင့်တက် သွားပါတယ်။ မီးခိုးခေါင်းတိုင် ထိပ်က နေ မီးခိုးတွေလည်း တလူလူ ထွက်လာတာ တွေ့ကြရပါတယ်။မီးခိုးတွေထွက်လာတာ တွေ့ရရုံသာမက ပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေကို မီးခိုးနံ့ပါ ရအောင် စီစဉ်ထားတဲ့ အတွက် တကယ့် မီးခိုးခေါင်းတိုင်ကြီးတွေလို့ ခံစားကြရအောင် ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သံမဏိ စက်ရုံ ကြီးတွေ သဏ္ဍန်ပေါ်ထွက်လာပြီး စက်ရုံထဲကနေ သံရည်ပူရဲရဲတွေ စီးကျလာပုံကိုလည်း ပေါ်လွင်အောင် ပြသသွားပါတယ်။
ဗြိတိသျှ လူမျိုးတွေ ဂုဏ်ယူကြတဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စနစ်ကို ဖော်ညွှန်းတဲ့ အနေနဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေ ကလေးငယ်တွေနဲ့သရုပ်ဖော်ပြသသွားပါတယ်။
နာမည်ကြီး ဗြိတိသျှ ဇာတ်ကောင် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းက ဘုရင်မကြီးကို စောင့်ရှောက်ပြီး ရဟတ်ယာဉ် ခေါ်ဆောင်လာဟန်ကိုလည်း ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန် ထည့်သွင်း ပြသသွားပါတယ်။ဗြိတိသျှ နာမည်ကျော် လူရွှင်တော် မစ္စတာ ဘီးန် ကိုလည်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။ဟယ်ရီပေါ်တာ စာရေး ဆရာ ဂျေကေ ရိုးလင်းရဲ့ မှော်ဇာတ်ကောင်တွေကိုလည်း ထည့်သွင်း ပြသသွားပါတယ်။ဒီပွဲဟာ ခန်းနားကြီးကျယ်ရုံသာမက ဗြိတိသျှ သမိုင်းနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကိုပါ ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒါရိုက်တာ ဒန်နီ ဘွိုင်း ကဆိုပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:26 PM No comments:
(ဒေ သ တွင်း နိုင် ငံ များ ရဲ့ ငြိမ်း ချမ်း မှု့ ကို နှောင့် ယှက် ဖျက် ဆီး နေ သော ဘ င်္ဂါ လီ )
အိန္ဒိယမှာလည်း ဘင်္ဂလီနဲ့ အာသံတိုင်းရင်းသားအရေးအခင်းဖြစ်ပွားနေ
အိန္ဒိယဒေသခံ အာသံ တိုင်းရင်းသားနဲ့ ဘင်္ဂါလီ မူဆလင်အဓိကရုဏ်း
(ဒေ သ တွင်း နိုင် ငံ များ ရဲ့ ငြိမ်း ချမ်း မှု့ ကို
နှောင့် ယှက် ဖျက် ဆီး နေ သော ဘ င်္ဂါ လီ )
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ဒေသ၊ အာသံပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေး အဓိ ကရုဏ်းတွေမှာ အနည်းဆုံး (၄၁) ယောက် သေဆုံး ခဲ့ရပြီး ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာ အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးလာသူတွေ ထောင်သောင်းချီပြီး ရောက်ရှိနေကြပါတယ်။
Bodo တောင်ပေါ်တိုင်းရင်း သားတွေနဲ့ နောက်ထပ်ဝင်ရောက် အခြေချလာတဲ့ ဘင်္ဂါလီ မူဆလင်တွေကြား မှာ အကြမ်းဘက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရက်အတော်ကြာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် အာသံပြည်နယ်ထဲက လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းတွေ အဆိုးဝါးဆုံး ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာ အိန္ဒိယ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကင်းလှည့်နေကြ ပါတယ်။ နောက်ထပ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ မဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် ဒီဒေသတွေမှာ ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ပြန် ထားပြီး ချိုးဖောက်သူတွေကို တွေတဲ့နေရာမှာ ပစ်ခတ်ဖို့ ပြည်နယ်အာဏာပိုင် တွေက လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ ၀င်တွေကို အမိန့်ပေးထားပါတယ်။
အာသံပြည်နယ်ဟာ တရုတ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ဘူတန်နိုင်ငံတွေနဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်း ဆက်စပ်နေပြီး ဘူတန်နဲ့ နယ်ချင်းထိစပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အကြမ်းဘက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ Bodo တောင်ပေါ်တိုင်းရင်း သားတွေနဲ့ နောက်ထပ်ဝင်ရောက် အခြေချလာ တဲ့ ဘင်္ဂါလီ မူဆ လင်တွေကြား မှာ ပဋိပက္ခတွေဟာ အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာကတည်းက ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တာပါ။
အခုမှာ လူပေါင်း နှစ်သိန်းလောက် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ အိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေက ဆိုပါတယ်။ အာသံပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ထာရွန် ဂိုဂိုရီ (Taron Gogori) ဟာ ဒီကနေ့မှာ မငြိမ်မသက် ဖြစ် ခဲ့တဲ့နေရာတွေကို လှည့်လည်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့် စနေနေ့မှာ အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် မန်းမိုဟန်ဆင်း (Manmohan Sign) လည်း အာသံပြည်နယ်ကို ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Credit by VOA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=489461274415470&set=a.244560532238880.74998.100000548054661&type=1&theater မှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:18 PM No comments:
ဒီနေ့ မှ စပြီး မိတ်ဆွေများ စာမျက်နှာအသစ်သို့ကြွေ...